တိုက်ရိုက်ကာစီနို လောင်းကစား စည်းမျဉ်းများ | SBOBET Information Center
တိုက်ရိုက်ကာစီနို လောင်းကစား စည်းမျဉ်းများ
Reference Number: AA-00214 Last Updated: 2020-11-30 13:400Rating/ Voters
အောက်ပါ ထုတ်ကုန်-သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းများ ("လောင်းကစား စည်းမျဉ်းများ") က www.sbobet.com ("ဝဘ်ဆိုက်") တွင် ရနိုင်သည့် အော်ပရေတာ၏ (သို့မဟုတ် SBOBET ကာစီနို၏) ပြန်လှန်တုံ့ပြန်သော ကာစီနို ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ("တိုက်ရိုက် ကာစီနို လောင်းကစားများ") အားလုံးအား တကယ်ကစားသူ ("ကစားသူ"၊ "သင်" သို့မဟုတ် "သင်၏") ၏ အသုံးပြုမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် စာရင်းသွင်းသူများ သို့မဟုတ် အော်ပရေတာနှင့်အတူ လောင်းကစား အကောင့်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူများထံ အော်ပရေတာက ပေးအပ်သည့် ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ပြီး လောင်းကြေးတင်ရသော ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အော်ပရေတာ၏ အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လောင်းကစား စည်းမျဉ်းများကြားတွင် ကွဲလွဲမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိသည့်အခါ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များက အတည် ဖြစ်ပါမည်။
အထွေထွေ လောင်းကစား စည်းမျဉ်းများ
ကစားသူသည် တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများတွင် ကစားသူ၏ ပါဝင်ကစားမှု၌ ပါနေသော ကိစ္စ၊ အကြောင်းရင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများ၏ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအား ဆန့်ကျင်လျက် သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် အရေးယူခြင်း မရှိရဘဲ ရပိုင်ခွင့်များ တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်ခြင်း မရှိရပါ။
တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများသည် ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ကြောင်းကို ကစားသူက သဘောတူပါသည်။ တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများ ကစားရန် ငွေကြေးဖြင့် လောင်းရန် မလိုအပ်ကြောင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်မထားကြောင်း ကစားသူက နားလည်ပြီး အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကစားသူအနေဖြင့် လောင်းကစားအား ငွေကြေးမလိုအပ်ဘဲ ကစားရန် ဆန္ဒရှိပါက၊ "သရုပ်ပြကစားခြင်း" ဧရိယာတွင်သာ ထိုသို့ လုပ်နိုင်ပါသည်။
3. တစ်ကိုယ်ရေ အသုံးပြုမှုအတွက်သာ
ကာစီနိုနှင့် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ကစားသူ၏ စိတ်ဝင်စားမှုသည် တစ်ကိုယ်ရေအတွက်သာဖြစ်ပြီး သက်မွေးလုပ်ငန်းအတွက် မဟုတ်ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်သို့ ကစားသူ ဝင်ရောက်ခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် တစ်ကိုယ်ရေ ဖျော်ဖြေရေး သီးသန့်သာ ဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများတွင် အခြား ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုအား တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။
တစ်နည်းနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသရွေ့ (ဥပမာ၊ တိုက်ရိုက်ဂိမ်းအချို့နှင့်) ချွတ်ယွင်းချက် အမျိုးအစားအားလုံး (ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ) က ဆော့ကစားမှုကို ပျက်ပြယ်စေပါမည်။ ညွှန်ပြသော ရလဒ်ကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲ ကနဦးကြေးအတိုင်း ပြန်ပေးမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
5. စမတ် ကစားသူနှင့် အသိဉာဏ်တု
SBOBET ကာစီနိုသည် စမတ် ကစားသူများ သို့မဟုတ် အခြား သံသယရှိသော စမတ် ကစားသူများနှင့် ဖဲချပ်ကောင်တာများကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဘော့တ်များဟုခေါ်သည့် အသိဉာဏ်တုကို အသုံးပြုသော လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှအား တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။ ဤမူဝါဒကို ဖောက်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုက ကစားသူ၏ အကောင့် ဆိုင်းငံ့ခံရခြင်းနှင့် ချန်လှပ်ခံရခြင်းကို ဖြစ်စေပါမည်။ အနိုင်ငွေများနှင့် ပွဲခအားလုံးကို အဆုံးရုံးခံရပါမည်။
6. တိုက်ရိုက် လောင်းကစားအတွက် တိုင်ကြားမှုများ
ကစားသူသည် တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်း ရလဒ်ကို မကျေနပ်ကြောင်းတိုင်ကြားရန် သို့မဟုတ် ငြင်းခုံရန် ဆန္ဒရှိပါက၊ ကစားချိန်တုန်းက ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲသူ ID၊ ဖဲဝေသူ၏ အမည်၊ စားပွဲ ID နှင့် အော်ပရေတာထံ ဆက်သွယ်သည့် အချိန်တုန်းက အလှည့် ID များအား အော်ပရေတာကို ပြောပြပေးရမည်။ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက အော်ပရေတာအနေဖြင့် တိုင်ကြားချက်ကို ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါ။ တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများ၏ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံများအား 24 နာရီကြာ သိမ်းဆည်ထားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကစားသူများအနေဖြင့် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်သည့် 24 နာရီအတွင်း ၎င်းတို့၏ တိုင်ကြားချက်ကို အကြောင်းကြားရပါမည်။ 24 နာရီနောက်ပိုင်းတွင် တင်ပြသည့် တိုင်ကြားချက်များအား ဗီဒီယို အထောက်အထား မရှိခြင်းကြောင့် အော်ပရေတာက ပယ်ချသွားပါမည်။
အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ရပ်တွင်၊ အော်ပရေတာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းကို ကစားသူက သိနားလည်ပြီး သဘောတူပါသည်။
မည်သည့်နေ့တွင်မဆို အများဆုံး စုစုပေါင်း နိုင်ပွဲ မရှိပါ။
8. တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများ
တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများအတွက်၊ တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများဆိုင်ရာ ရလဒ်အမှန်များသည် ယင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက် တပ်ဆင်ထားသည့် အီလက်ထရွန်းနစ် အာရုံခံကိရိယာ ပစ္စည်းက ထောက်လှမ်းထားသည့် ရလဒ်များ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့် ရလဒ်အား အီလက်ထရွန်းနစ် အာရုံခံကိရိယာများက ထောက်လှမ်းပြီး စာရင်းသွင်းထားခြင်း မရှိပါက၊ ယင်းရလဒ်အား မဖြစ်ပျက်ခဲ့ဟု ယူဆပြီး လော့ခ်ချထားသည့် ရလဒ်အားလုံးမှာ ရလဒ်မှန်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီးချိန်အထိ ဆက်လက်၍ လော့ခ်ကျနေပါမည်။
တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများတွင်ပါသော ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုခုဆိုင်ရာ သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းများသည် အောက်ပါ သတ်မှတ် တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းများ၏ စည်းမျဉ်းများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်း၏ သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းများကို မြင်နိုင်ရန် တိုက်ရိုက် ကာစီနို ဂိမ်းတစ်ခုခု၏ အမည်များပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဘက်ကာရက် / စူပါဆစ်
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ရောက်လက်
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဆစ်ဘို
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဘလက်ဂျက်
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဒရာဂွန်တိုက်ဂါး
1. တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဘက်ကာရက် / စူပါဆစ်
ဘက်ကာရက် ရွိုင်ရယ်ဆွိ ဘက်ကာရက် 338 ဆွိ
စူပါဆစ် ရွိုင်ရယ်ဆွိ စူပါဆစ် 338 ဆွိ
1.1 တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဘက်ကာရက်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
ကစားနည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ9နှင့် တန်ဖိုး အနီးဆုံးဖြစ်မည့် ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စု သို့မဟုတ် ဒိုင်၏ ဖဲချပ်စု တစ်ခုခုကို လောင်းရန် ဖြစ်သည်။ ကစားသူသည် သရေအပေါ်တွင်လည်း လောင်းနိုင်သည်။
ဤကစားနည်းသည် ကစားသူအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ လက်တွေ့ကျသော လောင်းကစား ပတ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးပေးရန် စခရင်ပေါ်တွင် ဖဲချပ်ဝေနေသည့် တိုက်ရိုက်လူတစ်ဦးဖြင့် ကစားသူအား တင်ဆက်ပေးပါသည်။
အယူအဆအရ ဤကစားနည်း၏ ကစားသူထံ ပြန်ပေးမှုမှာ 98.41% ဖြစ်သည်။
အချိန်ကာလ ကြာသည့်အခါ၊ တင်ထားသည့် စုစုပေါင်း ကြေးများအတွက် ကစားသူထံ ပျမ်းမျှ ပြန်ပေးမှုမှာ 98.48% ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
1.2 ပါဝင်ကစားမှု ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကြေး ရွေးစရာများ
ကြေးတင်ရန်၊ ကစားသူသည် ဂိမ်း ဝင်းဒိုး၏ ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ချပ်ပြားများ၏ ပုံများသို့ ကာဆာကို ရွှေ့ပြီး အသုံးပြုလိုသည့် ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို ဘယ်ကလစ် နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်တွင် ကစားသူသည် ကစားသူများ သို့မဟုတ် ဒိုင်များ၊ သရေ သို့မဟုတ် အတွဲ နှင့် / သို့မဟုတ် စူပါဆစ်ဟု မှတ်သားထားသည့် စားပွဲစားပွဲအဆင်အပြင်ပေါ်ရှိ လောင်းကစားခြင်း ဧရိယာသို့ ရွှေ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ကြေးများကို တင်ရန် ဘယ်ကလစ်ကို နှိပ်ရပါသည်။ ယှဉ်လျက်ရေးသားထားသော စုစုပေါင်းကြေး တန်ဖိုးနှင့်အတူ လောင်းကစားခြင်း အကွက်ပေါ်တွင် ချပ်ပြား အလိုအလျောက် ပေါ်လာပါမည်။ ဝင်းဒိုး၏ အောက်ခြေတွင်လည်း ကြေးပမာဏ ပေါ်လာပါမည်။
ဘယ်ကလစ် တစ်ချက်စီသည် ယင်းစားပွဲ၏ အများဆုံး ကြေးအထိ ကြေးတန်ဖိုးအား တူညီသော တန်ဖိုး၏ ချပ်ပြားတစ်ခုဖြင့် တိုးမြှင့်ပေးပါမည်။ ကစားသူသည် ဤကြေး၏ မတူညီသော ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို အသုံးပြုလိုပါက၊ ၎င်းအနေဖြင့် စခရင်ပေါ်ရှိ ဂိမ်း ဝင်းဒိုး၏ ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ချပ်ပြားများ၏ ပုံများသို့ ကာဆာကို ရွှေ့ပြီး အသုံးပြုလိုသည့် ချပ်ပြားတန်ဖိုးအသစ်ပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ် နှိပ်ရပါမည်။ ထို့နောက်တွင် ကစားသူသည် ကာဆာအား စားပွဲ အဆင်အပြင်ပေါ်ရှိ လောင်းကစားခြင်း ဧရိယာသို့ ပြန်ရွှေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြေးတိုးရန် ဘယ်ကလစ်ကို ထပ်နှိပ်ရမည်။
ကစားသူများသည် ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ အလယ်ရှိ လောင်းကစား တိုင်မာ မကုန်ခင် ၎င်းတို့၏ ကြေးများအား တင်ရပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့် လောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။
ကြေးနှစ်ဆ (DOUBLE) ခလုတ်သည် စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားပြီးဖြစ်သည့် အတည်ပြုမထားသော ကြေးအားလုံးကို နှစ်ဆ တင်နိုင်စေပါမည်။ တင်ထားပြီး အတည်ပြုထားသော ကြေးအားလုံးအား နှစ်ဆတင် မရနိုင်ပါ။
ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်အား ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးသည်နှင့် ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုပြီး ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူလာပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET ) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးနောက်ပိုင်း တင်ထားသော ကြေးအားလုံးမှာ နှိပ်နေခဲ့သည့် ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ထိုသို့မပြီးစီးပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
စားပွဲ အဆင်အပြင်မှ ကြေးအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်၊ ကြေးရှင်းရန် (CLEAR BETS) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ စားပွဲ အဆင်အပြင်မှ နောက်ဆုံး ကြေးကို ဖယ်ရှားရန်၊ ပြန်ထားရန် (UNDO) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ် မနှိပ်ရသေးခင်တွင်သာ ကြေးရှင်းရန် (CLEAR BETS) နှင့် ပြန်ထားရန် (UNDO) နှစ်ခုလုံးကို နှိပ်နိုင်ကြောင်း မှတ်သားပါ။ ကြေးရှင်းရန် (CLEAR BETS) ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့်၊ ကစားသူ ဖဲချပ်စုနှင့် ဒိုင် ဖဲချပ်စုဟုခေါ်သည့် ဖဲချပ်စု နှစ်ခုကို ဖဲဝေသူက ဝေပါမည်။ ဖဲချပ်အားလုံးအား လှန်ပြ၍ ဝေပါမည်။ ဖဲချပ်များအား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆွဲပါမည်။
ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ပထမဆုံး ဖဲချပ်။
ဒိုင်၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ပထမဆုံး ဖဲချပ်။
ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ဒုတိယ ဖဲချပ်။
ဒိုင်၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ဒုတိယ ဖဲချပ်။
ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါက၊ ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တတိယ ဖဲချပ်။
ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါက၊ ဒိုင်၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တတိယ ဖဲချပ်။
ဖဲချပ်စုနှစ်ခုလုံးအတွက် ဖဲချပ်သုံးခုထက်ပို၍ ဆွဲမယူနိုင်ပါ။
ဘာရာကတ် ကစားနည်းတွင် ကိုးထက်ကြီးသော တန်ဖိုးမရှိပါ။ ဖဲချပ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ယင်းအထက်၏ ပေါင်းခြင်းမှာ ကိုးထက်ကြီးလျှင် ဖဲချပ်အားလုံး၏ တန်ဖိုးများကို ပြန်တွက်ချက်ပါသည်။ ကိုးထက်ကြီးသော နံပါတ် ရောက်ချိန်တိုင်းတွင် ဤဖဲချပ်အသစ်၏ တန်ဖိုးအား ပေါင်းထားသော ဖဲချပ်တန်ဖိုးမှ တစ်ဆယ်ကို နှုတ်ခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့မှာ ဤမေးခွန်းအတွက် ဥပမာ အချို့ ဖြစ်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံး အမှတ် တန်ဖိုးရှိသော ဖဲချပ်စုက နိုင်ပါသည်။ ရှုံးသော ကြေးအားလုံးကို သိမ်းပြီး နိုင်သော ကြေးအားလုံးကို ပေးပါသည်။ လောင်းကြေးနိုင်ပါက၊ အနိုင်ငွေများအား ခရက်ဒစ် လက်ကျန်သို့ ပေးပို့ပြီး နောက်ထပ် ကစားနည်းကို ရွေးပြီးနောက် သို့မဟုတ် ဧည့်ခန်းသို့ ပြန်သွားပြီးနောက် ခရက်ဒစ်များ ပြသချက်တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်သွားပါမည်။
ဖဲချပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင် အမှတ်တန်ဖိုး တူနေပါက၊ ယင်းကစားပွဲမှာ သရေဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်လုံးက အနိုင် သို့မဟုတ် အရှုံးမရှိပါ။ ဤအခြေအနေတွင်၊ သရေ လောင်းကြေးများက နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် ကစားသူများနှင့် ဒိုင်များ၏ ကြေးများက မနိုင် သို့မဟုတ် မရှုံးသောကြောင့် ကြေးမှာ ကစားသူသို့ ပြန်ရောက်ပါသည်။
ဘာရာကတ် သတ်မှတ်ချက်အချို့အား ရှင်းလင်းချက်အပြည့်အစုံနှင့်အတူ အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒရာဂွန်ဘောနက်သည် ရွေးထားသော ဖဲချပ်စုက ဒိုဖြင့် အနိုင်ရပါက သို့မဟုတ် ရွေးထားသော ဖဲချပ်စုက4မှတ် ခြားပြီး နိုင်ပါက (မဒိုသော) ပေးချေသည့် တိုက်ရိုက် ဘာရာကတ် ကစားနည်း၏ ဘေးထိုးကြေး တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အများဆုံး ထုတ်ပေးငွေမှာ9မှတ် ကွာပြီး အနိုင်ရသည့် ဒို မဟုတ်သော နိုင်ပွဲများအတွက် ဖြစ်သည့် 1 အတွက် 30 ဖြစ်ပါသည်။
ကစားသူ သို့မဟုတ် ဒိုင် ဒရာဂွန်ဘောနက်အတွက် ကြေးအားလုံးသည် ပေးငွေ ဇယားနှင့်အညီ မတူကွဲပြားစွာ ပေးချေပါမည်။
9 မှတ် ကွာဟချက် 30:1
8 မှတ် ကွာဟချက် 10:1
7 မှတ် ကွာဟချက် 6:1
6 မှတ် ကွာဟချက် 4:1
5 မှတ် ကွာဟချက် 2:1
4 မှတ် ကွာဟချက် 1:1
ဖော်ကျွန်းဆစ်သည် တိုက်ရိုက် ဘာရာကတ်တွင် ဘေးထိုးကြေး တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းခြောက်ဖြင့် ဒိုင်ဖဲချပ်စုနိုင်ပါက ကြေးရပါမည်။ စုစုပေါင်းခြောက်ဖြင့် ဒိုင်ဖဲချပ်စုနိုင်ပါက 1 အတွက် 20 ပေးပြီး ဖဲချပ်သုံးခု ပါဝင်ပြီး ဖဲချပ်နှစ်ခုဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါက 1 အတွက် 12 ပေးပါသည်။
စုစုပေါင်း6ချပ်နှင့်3ချပ်ဖြင့် ဒိုင် နိုင်ပါသည်။ 20:1
စုစုပေါင်း6ချပ်နှင့်2ချပ်ဖြင့် ဒိုင် နိုင်ပါသည်။ 12:1
ထုတ်ပေးငွေများအား အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အာရှရှိ မြို့ကြီးများအားလုံးတွင် အသုံးပြုသည့် စံအချိုးအစားများနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျသည်ဟု သင်မြင်တွေ့ရမည့် အချိုးအစားအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
အနိုင်ရသော ကစားသူများ၏ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 1 (အချိုးတူ) ကို ရရှိသည်။
အနိုင်ရသော ဒိုင်များ၏ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 1 (အချိုးတူ) ကို ရရှိသည်။ သို့သော်၊ အနိုင်ငွေ၏ 5% နှင့်ညီသော ပွဲခအား အလိုအလျောက် နုတ်ပါသည်။
အနိုင်ရသော သရေ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 8 ကို ရရှိသည်။ သရ ဖြစ်ပါက၊ ဒိုင်များ သို့မဟုတ် ကစားသူများအတွက် ကြေးများအား ကစားသူထံသို့ ပြန်ပေးပါသည်။
အနိုင်ရသော ကစားသူအတွဲ / ဒိုင်အတွ၏ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 11 ကို ရရှိသည်။ အနိုင်ရရန် ကစားသူ / ဒိုင် ပထမနှင့် ဒုတိယ ဖဲချပ်စုအား အတွဲလုပ်ရမည်။
စူပါဆစ် (ပွဲခမပါသော ဘာရာကတ်)
အနိုင်ရသော ကစားသူ၏ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 1 (အချိုးတူ) ကို ရရှိသည်။
ဒိုင်က ခြောက်မှတ်ဖြင့် အနိုင်ရသည်မှလွဲ၍ အနိုင်ရသော ဒိုင်၏ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 1 (အချိုးတူ) ကို ရရှိသည်။
ခြောက်မှတ်ဖြင့် နိုင်သော ဒိုင်နှင့်အတူ အနိုင်ရသော ဒိုင်၏ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက်2(ယင်းဖြစ်ရပ်တွင်၊ ဒိုင်ပေါ်တင်ထားသည့် ပမာဏ၏ 50% ကိုသာ ပေးပါမည်) ကို ရရှိသည်။
အနိုင်ရသော စူပါဆစ် ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 12 ကို ရရှိသည်။ အနိုင်ရရန် ဒိုင်သည် အရေအတွက် ခြောက်မှတ်ရအောင် လုပ်ရမည်။
စားပွဲတွင် ကစားသူ ထိုင်ပြီးနောက် လောင်းကစား စားပွဲ၏ လောင်းကြေး ကန့်သတ်ချက်များ မီနျူးအတွင်း၌သာ အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံးကြေး ကန့်သတ်ချက်များကို ပြသပါမည်။
1.3 တိုက်ရိုက် ဘာရာကတ် စည်းမျဉ်းများ
ကစားသူများနှင့် ဒိုင်များဆိုသည့် ဝေါဟာရများမှာ ကစားသည့် တစ်လှည့်စီအတွင်း ဖဲထုပ်မှ ဝေပေးသည့် ဖဲချပ်များ၏ ဖဲချပ်စုနှစ်ခုအတွက် ပေးထားသော အမည်များ ဖြစ်သည်။ ကစားသူသည် ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စု သို့မဟုတ် ဒိုင် ဖဲချပ်စု တစ်ခုခုတွင် လောင်းနိုင်သည်။ ကစားသူသည် သရေအပေါ်လည်း လောင်းနိုင်ပါသည်။
ဒို ဖဲချပ်စုမှာ စုစုပေါင်း ရှစ် သို့မဟုတ် ကိုးဖြစ်သည့် ဖဲချပ်စုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နိုင်သော ဖဲချပ်စုမှာ ဒိုကိုးဖြစ်ပြီး ဒိုင် သို့မဟုတ် ကစားသူ ဖဲချပ်စုအတွက် ရထားသည့် ပထမနှစ်ကတ်မှာ စုစုပေါင်း ကိုးဖြစ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဖဲချပ်စုမှာ ဒိုရှစ် ဖြစ်သည်။ ဒိုကို ဆွဲလိုက်ပါက၊ ၎င်းမှာ အလိုအလျောက် နိုင်သော ဖဲချပ်စုဖြစ်ပြီး ၎င်းအား ဒိုနိုင်ပွဲဟု ခေါ်သည်။ ဖဲချပ်စုတစ်ခုကမျှ ဒိုတက်လာသောအခါ တတိယ မရတော့ပါ။
ဖဲချပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင် တန်ဖိုးတူပါက၊ သရေ ဖဲချပ်စုမှာ ရလဒ် ဖြစ်သည်။
ကစားသူအတွဲ သို့မဟုတ် ဒိုင်အတွဲ
ကစားသူ သို့မဟုတ် ဒိုင်ဖဲချပ်စု၏ ပထမနှစ်ချပ်က တစ်တွဲဖြစ်ပါသည် (ဥပမာ 8၊ 8 သို့မဟုတ် K၊ K)။
ခြောက်မှတ်ဖြင့် ဒိုင်အနိုင်ရသည့် ဖြစ်ရပ်မှလွဲ၍ ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 1 ကို ရရှိမည့် ဒိုင်ပေါ်တွင် ကြေးများတင်သော ဘာရာကတ်၏ ဗားရှင်းတစ်ခု (ယင်းဖြစ်ရပ်တွင်၊ ဒိုင်ပေါ် လောင်းထားသည့် ပမာဏ၏ 50% ကိုသာ ပေးပါမည်)။
အခြားရလဒ်ရှုံးနေပြီး ရမှတ် အရေအတွက် ခြောက်မှတ်ဖြင့် အနိုင်ရရန် ဒိုင်ပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ဘေးထိုးကြေးတစ်ခု။
1.4 ဖဲချပ် တန်ဖိုးများ
တစ်ဆယ်များ၊ ရုပ်ပုံဖဲချပ်များ၊ (ဂျက်များ၊ ကွင်းများနှင့် ကင်းများနှင့် အေ့စ်များ) မှလွဲ၍ ဖဲချပ်အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ အမြင်တန်ဖိုးအတိုင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ဆယ်များနှင့် "ရုပ်ပုံဖဲချပ်များ" အားလုံးအား သုညဟု ရေတွက်သည်။
အေ့စ်များအား တစ်ဟု ရေတွက်သည်။
1.5 ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများ
ဤကစားနည်းတွင် ရွေးချယ်နိုင်သည့် ဖဲချပ်ဆွဲ စည်မျဉ်းများ မရှိပါ။ ဖဲချပ်များကို ဆွဲ သို့မဟုတ် မဆွဲခြင်းအား အောက်ပါ စည်းမျဉ်းများအရ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ယင်းစည်းမျဉ်းများအား "ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများ" သို့မဟုတ် "Tableau" ဟု ခေါ်ပြီး ယင်းက အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အာရှရှိ မြို့ကြီးများအားလုံးတွင် အသုံးပြုသည့် စံနှုန်းများနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျပါသည်။
ကစားသူများ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တတိယ ဖဲချပ်ဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား အောက်ပါကဲ့သို့ စံကာစီနို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အလိုအလျောက် ချမှတ်ပါသည်။
ပထမ ဖဲချပ်နှစ်ကတ်၏ စုစုပေါင်း
ဆွဲရန် သို့မဟုတ် မဆွဲတော့
0, 1, 2, 3, 4,5ဒိုင်သည် ဒိုမဟုတ်သရွေ့ တတိယ ဖဲချပ် ဆွဲပါ
6,7မဆွဲတော့
8,9မဆွဲတော့ (ဒို)
ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စု စုစုပေါင်းမှာ 0၊ 1၊ 2၊ 3၊4သို့မဟုတ်5ဖြစ်ပြီး ဒိုင်၏ ဖဲချပ်စုမှာ ဒို 8 သို့မဟုတ် ဒို9မဟုတ်သရွေ့ ကစားသူများအတွက် တတိယ ဖဲချပ်ကို အလိုအလျောက် ဆွဲပေးပါသည်။
ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စု ပေါင်းခြင်းမှာ6သို့မဟုတ်7ဖြစ်ပါက ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မဆွဲတော့ရန် ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းမှာ 0၊ 1၊ 2၊ 3၊4သို့မဟုတ်5ဖြစ်သည့် ဒိုင်၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ဖဲချပ်တစ်ခုကို အလိုအလျောက် ဆွဲပါမည်။
ကစားသူများ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တတိယ ဖဲချပ်ကို ဆွဲလိုက်ပါက၊ ဒိုင်များ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တတိယ ဖဲချပ်ဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား အောက်ပါကဲ့သို့ စံကာစီနို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အလိုအလျောက် ချမှတ်ပါသည်။
ကစားသူများ၏ တတိယမှာ ဤသို့ဖြစ်လျှင်ဆွဲရန်
ကစားသူများ၏ တတိယမှာ ဤသို့ဖြစ်လျှင်မဆွဲတော့ရန်
0၊ 1၊20၊ 1၊ 2၊ 3၊ 4၊ 5၊ 6၊ 7၊ 8၊ 9
3 0၊ 1၊ 2၊ 3၊ 4၊ 5၊ 6၊ 7၊98
4 2၊ 3၊ 4၊ 5၊ 6၊70၊ 1၊ 8၊ 9
5 4၊ 5၊ 6၊70၊ 1၊ 2၊ 3၊ 8၊ 9
6 6၊70၊ 1၊ 2၊ 3၊ 4၊ 5၊ 8၊ 9
8၊9မဆွဲတော့ (ဒို)
1.6 ပစ်ဖဲ မရှိ
ဒိုင်သည် ကစားနည်းပွဲများအတွင်း ပစ်ဖဲကို မသုံးပါ။
ဖဲချပ်များ ခွဲနေစဉ်အတွင်း လူ သို့မဟုတ် လူမဟုတ်သော အမှားတစ်ခုခု ဖြစ်ပါက ဖဲချပ်အဖုံများကို ပြန်ခွဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် အော်ပရေတာတွင် ရှိပါသည်။
အတည်ပြုရန် ခလုတ်အား နှိပ်ပြီးသည်နှင့် ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုပြီး ကစားသူများ၏ အကောင့်သို့ ယူလာပါမည်။
တိုက်ရိုက် ဘာရာကတ် အတွဲကြေး ကစားနည်း စည်းမျဉ်းများသည် သမားရိုးကျ ဘာရာကတ်နှင့် အားလုံးနီးပါးတူပြီး၊ ကွဲပြားချက်မှာ သင်သည် ကစားသူ အတွဲ / ဒိုင် အတွဲ အပြင် ကစားသူ / ဒိုင် နိုင်ပွဲများတွင်လည်း သင်ကြေးတင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရန် ကစားသူ / ဒိုင် ပထမနှင့် ဒုတိယ ဖဲချပ်စုအား အတွဲလုပ်ရမည်။
ထုတ်ပေးငွေမှာ 1 အတွက် 11 ဖြစ်သည်။
စူပါဆစ် ကြေးရွေးစရာအား စူပါဆစ် (ပွဲခမပါသော ဘာရာကတ်) စားပွဲတွင်သာ ရနိုင်ပါသည်။ ၎င်းမှာ အခြားရလဒ်ရှုံးနေပြီး ရမှတ် အရေအတွက် ခြောက်မှတ်ဖြင့် အနိုင်ရရန် ဒိုင်ပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ဘေးထိုး အလောင်းအစား တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ထုတ်ပေးငွေမှာ 1 အတွက် 12 ဖြစ်သည်။
1.10 အီလက်ထရွန်းနစ် ချွတ်ယွင်းချက်များ
ဖဲချပ်အား ဖဲဝေသူက စကန်ဖတ်ပြီး ရလဒ်အား ကစားသူများ၏ ကွန်ပျူတာ စခရင်ပေါ်တွင် ပြသပါမည်။ ကတ်တစ်ခုခုကို စကန်ဖတ်မရပါက၊ ကစားသူများထံ ရလဒ်ကို ပြသရန်ငှာ ဖဲဝေသူသည် ကတ်ကို ပြန်လည်၍ စကန်ဖတ်ပါမည်။
ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ပြဿနာများ အကန့်အသတ်မရှိ အပါအဝင် ကစားသူများ၏ စက်ပစ္စည်း ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခု၊ ကစားပွဲ ရလဒ်ကို ပျက်ပြယ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ ကစားသူများက အစီရင်ခံစာ အပိုင်းရှိ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် လောင်းကြေး မှတ်တမ်းကို စစ်နိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက် ဘာရာကတ်အတွင်း အော်ပရေတာ စနစ် ချွတ်ယွင်းချက် နှင့် / သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုက ကစားပွဲကို ပျက်ပြယ်စေပြီး သီးသန့် စားပွဲကို ပိတ်ပါမည်။
1.11 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ
မတော်တဆဖြင့် ဖဲချပ် နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုအထက်ကို တစ်ပြိုင်နက် ဝေမိသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ လက်ရှိ အလှည့်ကို ဖျက်သိမ်းပါမည်၊ ကြေးအားလုံးအား ပြန်ထားပြီး သီးခြား ဖဲထုပ်အား အသစ်တစ်ခုဖြင့် အစားထိုးပါမည်။
ဖဲခွဲစဉ် ဖဲချပ်တစ်ခုခုကို ပြမိသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဖဲထုပ်အား အစားထိုးသွားပြီး ဖဲဝေသူက ဖဲချပ် အစုအသစ်ကို ခွဲသွားပါမည်။
ဖဲချပ်တစ်ခုခု စားပွဲပေါ်က ကျသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ လက်ရှိ အလှည့်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကြေးအားလုံးအား ပြန်ထားကာ သီးခြား ဖဲထုပ်အား အသစ်တစ်ခုဖြင့် အစားထိုးပါမည်။
လက်ရှိ ကစားပွဲ ပြီးသည့်နောက် ဖဲဝေသူသည် အပိုဖဲချပ်ကို ဝေပါက၊ လက်ရှိ ကစားပွဲ ရလဒ်အား မှန်သည်ဟု ယူဆပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဖဲထုပ်အား အသစ်တစ်ခုဖြင့် အစားထိုးပါမည်။
ဖဲချပ်တစ်ခုအား အနေအထားမှားပြီး ထားမိသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးက ကွန်ပျူတာ စခရင်အရ ဖဲချပ် အနေအထားကို ပြန်ပြင်ဆင်ပါမည် (အနေအထား အမှန်)။
ကစားသူသည် ကစားပွဲ ရလဒ်ကို မကျေနပ်ကြောင်းတိုင်ကြားရန် သို့မဟုတ် ငြင်းခုံရန် ဆန္ဒရှိပါက၊ ကစားချိန် ရက်စွဲနှင့် အချိန်၊ စားပွဲ ID၊ SBOBET ကာစီနိုထံ ဆက်သွယ်သည့် အချိန်၌ ဖဲဝေသူ၏ အမည်နှင့် အလှည့် နံပါတ်အား ၎င်းတို့အနေဖြင့် SBOBET ကာစီနိုထံ ပေးပို့ရမည်။ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းက SBOBET ကာစီနို၏ တိုင်ကြားချက် ပယ်ချခံရခြင်းကို ခံရနိုင်ပါသည်။ ဝေနေသော ဖဲချပ်၏ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံအား 24 နာရီကြာ သိမ်းဆည်းပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အငြင်းပွားမှု၏ 24 နာရီအတွင်း အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ တိုင်ကြားချက်အား ကစားသူများက တင်ပြရပါမည်။ 24 နာရီနောက်ပိုင်းတွင် တင်ပြသည့် တိုင်ကြားချက်များအား နောက်ထပ် ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ SBOBET ကာစီနိုက ပယ်ချသွားပါမည်။
2တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ရောက်လက်
ရွိုင်ရယ်ဆွိ 388 ဆွိ
2.1 သုညတစ်လုံး ရောက်လက်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
နံပါတ် အကွက် သုံးဆယ့်ခြောက်ခုပါသည့် လှည့်ဘီးပေါ်တွင် ဘောလုံးကို လှည့်ခြင်းဖြင့် သုညတစ်လုံး ရောက်လက်ကို ကစားပါသည်။ ကစားနည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပတ်ချာလည်နေသော ဘီးအတွင်း မည်သည့်နေရာတွင် ဘောလုံး ရပ်နားမည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ နံပါတ် 0-36 အထိ အညွှန်းတပ်ထားသော ဘီးအတွင်း တစ်ခုချင်း နံပါတ်တပ်ထားသည့် အပိုင်း 37 ခု ရှိပါသည်။ စားပွဲပေါ်တွင် ပြသထားသည့် နံပါတ်အုပ်စုအမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် နံပါတ် 37 ခုအနက် တစ်ခုခုပေါ်တွင် ကြေးများကို တင်နိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်သော နံပါတ်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်၊ သင့်လောင်းကြေးအတွက် အမြတ်ရပါမည်။ ထုတ်ပေးငွေ ပမာဏသည် လောင်းကြေးတင်ပုံအပေါ် မူတည်ပါသည်။
အယူအဆအရ ဤကစားနည်း၏ ကစားသူထံ ပြန်ပေးမှုမှာ 97.38% ဖြစ်သည်။
အချိန်ကာလ ကြာသည့်အခါ၊ တင်ထားသည့် စုစုပေါင်း ကြေးများအတွက် ကစားသူထံ ပျမ်းမျှ ပြန်ပေးမှုမှာ 97.34% ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
2.2 ပါဝင်ကစားမှု ညွှန်ကြားချက်များ
ကစားသူ၏ ချပ်ပြားများအား ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ အောက်ညာထောင့်ရှိ သတ်မှတ်တန်ဖိုးအလိုက် ဆင့်စီပါသည်။ ကြေးတင်ရန်၊ ကစားသူသည် ချပ်ပြားများ၏ ပုံများသို့ ကာဆာကို ရွှေ့ပြီး အသုံးပြုလိုသည့် ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို ဘယ်ကလစ် နှိပ်ရမည်။ ထို့နောက်တွင် ကစားသူသည် ကာဆာအား ကြေးတင်လိုသည့် စားပွဲ အဆင်အပြင်ပေါ်ရှိ နေရာများသို့ ရွှေ့ပြီးနောက် ယင်းနေရာတစ်ခုစီတွင် ဘယ်ကလစ်ကို နှိပ်ပါ။ မှန်သော ကြေး နေရာမဟုတ်သရွေ့ စနစ်သည် ကစားသူအား ချပ်ပြားကို တင်ခွင့်မပြုပါ။ ချပ်ပြားများသည် ကာဆာအောက်တွင် အလိုအလျောက် ပေါ်လာပါမည်။ ကြေးပမာဏသည် ဝင်းဒိုး၏ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေတွင်လည်း ပေါ်လာပါမည်။ တူညီသောနေရာတွင် ကာဆာထားပြီး ဘယ်ကလစ် တစ်ချက်စီသည် ယင်းနေရာ၏ အများဆုံး ကြေးအထိ ကြေးတန်ဖိုးအား တူညီသော တန်ဖိုး၏ ချပ်ပြားတစ်ခုဖြင့် တိုးမြှင့်ပေးပါမည်။
ကစားသူသည် မတူညီသော ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို ပြောင်းလိုပါက၊ ၎င်းအနေဖြင့် စခရင်ပေါ်ရှိ ဂိမ်း ဝင်းဒိုး၏ ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ချပ်ပြားများ၏ ပုံများသို့ ကာဆာကို ရွှေ့ပြီး အသုံးပြုလိုသည့် ချပ်ပြားတန်ဖိုးအသစ်ပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ် နှိပ်ရပါမည်။ ထို့နောက်တွင် ကစားသူသည် ကာဆာအား စားပွဲ အဆင်အပြင်ပေါ်ရှိ လောင်းကစားခြင်း ဧရိယာသို့ ပြန်ရွှေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြေးများတင်ရန် ယခင်ကဲ့သို့ ဘယ်ကလစ်ကို နှိပ်ပါ။
စားပွဲ အဆင်အပြင်မှ ကြေးအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်၊ ကြေးရှင်းရန် (CLEAR BETS) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ စားပွဲ အဆင်အပြင်မှ နောက်ဆုံး ကြေးကို ဖယ်ရှားရန်၊ ပြန်ထားရန် (UNDO) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ကြေးအတည်ပြုရန် (CLEAR BETS) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ် မနှိပ်ရသေးခင်တွင်သာ ကြေးရှင်းရန် (CLEAR BETS) နှင့် ပြန်ထားရန် (UNDO) နှစ်ခုလုံးကို နှိပ်နိုင်ကြောင်း မှတ်သားပါ။ ကြေးရှင်းရန် (CLEAR BETS) ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
ယခင် အလှည့်အတွက် တင်ထားသည့်အတိုင်း တူညီသော ကြေးများကို အစားထိုးရန်၊ ကြေးပြန်တင်ရန် (RE-BET) ခလုတ်အား ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
စခရင်၏ ညာဘက်ထောင့်ရှိ 45 စက္ကန့် လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ကစားသူများက ၎င်းတို့၏ ကြေးများကို တင်ရပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့် လောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။
ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်အား ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးသည်နှင့် ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုပြီး ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူလာပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးနောက်ပိုင်း တင်ထားသော ကြေးအားလုံးမှာ နှိပ်နေခဲ့သည့် ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ထိုသို့မပြီးစီးပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
ကစားသူသည် အနည်းဆုံး ကြေး ကန့်သတ်ချက်အောက်နည်းသော ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM BET) ခလုတ်အား ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါက၊ ကစားသူအား ထပ်ဖြည့်ပြီး အတည်ပြုရန် သို့မဟုတ် ဂိမ်းသို့ပြန်သွားရန်ဆိုသည့် ရွေးစရာနှစ်ခု ကမ်းလှမ်းသော သတိပေးချက် ဝင်းဒိုး ပေါ်လာပါမည်။ ထပ်ဖြည့်ရန် (TOP UP) နှင့် အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ ကစားသူသည် မမှန်သော လောင်းကြေးအားလုံးအား သက်ဆိုင်ရာ အနည်းဆုံး ကန့်သတ်ချက်သို့ ထပ်ဖြည့်နိုင်ပြီး ဆက်လက်၍ ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုကာ ကစားသူများ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ ဂိမ်းသို့ပြန်သွားရန် (RETURN TO GAME) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ အတည်ပြုထားသည့် ကြေးများ မရှိဘဲ ကစားသူသည် လက်ရှိ ကြေး ရွေးစရာများသို့ ပြန်ရောက်ပါမည်။
2.3 ကြေး ရွေးစရာများ
ကစာသူများက ၎င်းတို့၏ ချပ်ပြားများကို ထည့်သည့်နေရာအပေါ် မူတည်၍၊ ၎င်းတို့က ကြေးတစ်ခုတည်းဖြင့် နံပါတ်တစ်မှ နံပါတ် တစ်ဆယ့်ရှစ်အထိ စိတ်ကြိုက် လောင်းနိုင်ပါသည်။
ကစားသူသည် တစ်ဦးတည်း ကစားသူ ဥရောပသမဂ္ဂ ရောက်လက် စားပွဲတွင် မတူညီသော ကြေးရှစ်မျိုးကို လောင်းကြေးတင်နိုင်ပါသည်။ ကြေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးစီတွင် နံပါတ် အပိုင်းအခြားတစ်ခု ပါဝင်ပြီး တစ်မျိုးစီတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ပေးငွေ နှုန်းထား ရှိပါသည်။ နံပါတ်သုံးခုပါ လိုင်းအတိုများအား ဘုတ်ပေါ်တွင် အတန်းများဟုခေါ်သော်လည်း တစ်ဆယ့်နှစ်ပါသည့် လိုင်းအရှည်များအား ကော်လံများဟု ခေါ်ပါသည်။ ကြေးများ၏ ပထမဆုံး အမျိုးအစား ငါးမျိုးအား နံပါတ်တပ်ထားသည့်နေရာ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကြားရှိ လိုင်းများတွင် တင်ရပြီး အတွင်း လောင်းကြေးများဟု ခေါ်သော်လည်း နောက်ဆုံးအမျိုးအစားသုံးခုအား ဘုတ်၏ အနားစွန်းအနီးတွင် ရှိသည့် အထူးအကွက်များပေါ်တွင် တင်ရပြီး ၎င်းတို့အား အပြင်ဘက် လောင်းကြေးများဟု ခေါ်ပါသည်။ ယင်းကြေးများအား အောက်တွင် ဇယားဆွဲပြထားသည်။
ရွိုင်ရယ်ဆွိ 338 ဆွိ
အဆင်အပြင်၏ အပေါ်ရှိ0နှင့်အတူ၊ ဘီးပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့် အနီ 36 ခုနှင့် အနက်ဂဏန်းများအားလုံး ပါဝင်သော 12 x3ဂရစ်ဖြင့် ဇယားကို ရေးဆွဲထားသည်။ ကစားသူသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လောင်းကစားခြင်း နေရာအားလုံးတွင် ချပ်ပြားများကို ထားနိုင်ပါသည်။
ရိုးရိုး လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်အပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော ရိုးရိုး ကြေး 37 ခု ရှိသည်။ ကြေးအား သတ်မှတ်နံပါတ်တစ်ခုခု၏ လေးထောင့်ကွက်အတွင်း ထည့်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
အခွဲ လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်နှစ်ခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော အခွဲ လောင်းကြေး 60 ခု ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် စားပွဲ အဆင်အပြင်ပေါ်တွင် ကပ်လျက်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထောင့်ဖြတ်မဟုတ်ရပါ။ ကပ်လျက် နံပါတ်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခု၏ လေးထောင့် အနားစပ်နှင့် ထိစပ်နေသော မျဉ်းပေါ်တွင် ကြေးတင်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
စတွိ လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်သုံးခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော စတွိ လောင်းကြေး 12 ခု ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် စားပွဲ အဆင်အပြင် တစ်လျှောက်ရှိ တန်းများပေါ်တွင် ရှိရပါမည်။ နံပါတ်များအတန်း၏ ဘယ်ဘက်ရှိ မျဉ်းပေါ်တွင် ကြေးတင်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်သုံးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
ကော်နာ လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်လေးခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော ကော်နာ လောင်းကြေး 22 ခု ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် စားပွဲ အဆင်အပြင်၏ ထောင့်တစ်ခုကို မျှဝေရပါမည်။ နံပါတ်လေးခုလုံး၏ စုံမှတ်တွင် ကြေးတင်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်လေးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
ဇီးရိုးဆက်ရှင် လောင်းကြေးသည် သီးခြား အနိုင် နံပါတ်လေးခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇီးရိုးဆက်ရှင် ကြေး 1 ခုတည်းသာ ရှိပါသည်။ ၎င်းနံပါတ်များမှာ 0၊ 1၊ 2၊3တို့ ဖြစ်သည်။ နံပါတ်လေးခုလုံး၏ ဘယ်ဘက်စုံမှတ်တွင် ကြေးတင်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်လေးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
ဇီးရိုး ကော်နာ လောင်းကြေးသည် သီးခြား အနိုင် နံပါတ်သုံးခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇီးရိုး ကော်နာ ကြေးနှစ်ခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ 0၊ 1၊2နှင့် 0၊ 2၊3တို့ ဖြစ်သည်။ နံပါတ်သုံးခုလုံး၏ စုံမှတ်တွင် ကြေးတင်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်သုံးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
ဆစ်လိုင်း လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်ခြောက်ခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော ဆစ်လိုင်း လောင်းကြေး 11 ခု ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် စားပွဲ အဆင်အပြင် တစ်လျှောက်ရှိ ကပ်လျက်တန်းနှစ်ခုပေါ်တွင် ရှိရပါမည်။ နံပါတ်များ၏ ဘယ်ဘက်နှင့် တန်းနှစ်ခုကြားရှိ လိုင်းပေါ်တွင် ကြေးတင်ရပါသည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ်ခြောက်ခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
ကော်လံ လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်တစ်ဆယ့်နှစ်ခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော ကော်လံ လောင်းကြေး3ခု ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် စားပွဲ အဆင်အပြင်အောက်ပိုင်း ကော်လံသုံးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ရပ်ရပါမည်။ အဆင်အပြင်၏ အောက်ခြေတွင် ပေးထားသည့် အကွက်ထဲတွင် ကြေးတင်ရပါမည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ် တစ်ဆယ့်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် အခြား နံပါတ်တစ်ခုခုအတွက်၊ ဤလောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
ရွိုင်ရယ်ဆွိ 338 Suite
ဒိုဇန် လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်တစ်ဆယ့်နှစ်ခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော ဒိုဇန် လောင်းကြေး3ခု ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် စားပွဲ အဆင်အပြင်အပေါ်ရှိ ဒိုဇန်နယ်ပယ် သုံးခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ရပ်ရပါမည်။ အဆင်အပြင်၏ ဘယ်ဘက်တွင် ပေးထားသည့် အကွက်ထဲတွင် ကြေးတင်ရပါမည်။ ဘီးထဲရှိ ယင်းနံပါတ် တစ်ဆယ့်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုတွင် ဘောလုံး ရပ်တန့်ပါက၊ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။ ဘီးထဲရှိ အခြားနံပါတ်တွင် အခြား နံပါတ်တစ်ခုခုအတွက်၊ ဤလောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။
အီးဗန်းချန့််စ် လောင်းကြေးသည် ရွေးထားသော အနိုင် နံပါတ်တစ်ဆယ့်ရှစ်ခုမှ တစ်ခုအပေါ် ကြေးထပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော အီးဗန်းချန့််စ် လောင်းကြေး6ခု ရှိသည်။ အဆင်အပြင်၏ ဘယ်ဘက်တွင် ပေးထားသည့် အကွက်ထဲတွင် ကြေးတင်ရပါမည်။ ဘောလုံးသည် နံပါတ်
1 နှင့် 18 ကြားတွင် ရပ်တန့်ပါက၊ 1 မှ 18 အထိ ကြေးများ နိုင်ပါသည်။
စုံနံပါတ် တစ်ခုခုဆိုလျှင်၊ စုံ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။
အနီရောင် နံပါတ် တစ်ခုခုဆိုလျှင်၊ အနီရောင် လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။
အနက်ရောင် နံပါတ် တစ်ခုခုဆိုလျှင်၊ အနက်ရောင် လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။
မနံပါတ် တစ်ခုခုဆိုလျှင်၊ မ လောင်းကြေး နိုင်ပါသည်။
19 နှင့် 36 ကြားတွင် ရပ်တန့်ပါက၊ 19 မှ 36 အထိ ကြေးများ နိုင်ပါသည်။
အခြား ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ယင်းကြေးများ ရှုံးသည်။
2.4 ကြေညာထားသော ကြေး
2.4.1 လောင်းကစားခြင်း ဧရိယာ
ရောက်လက် ဘီးပေါ်ရှိ ရွေးထားသော ဧရိယာတွင် ကစားသူ ကြေးတင်နိုင်ပါသည်။ လောင်းကစားခြင်း ဧရိယာ4မျိုး ရှိပါသည်။ အောက်ပါရုပ်ပုံတွင် ပြသထားသည့် ရောက်လက် ပြေးလမ်းပေါ်ရှိ ဧရိယာတစ်ခုကို ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကစားသူ ကြေးများ တင်နိုင်ပါသည်။
ဂျူး (Jeu)0ဧရိယာ
နံပါတ်7ခု ပါသည်- 12၊ 35၊ 3၊ 26၊ 0၊ 32 နှင့် 15 (12 မှ 15)
နံပါတ်ပေါ်တွင် ရိုးရိုး လောင်းကြေး- 26
နံပါတ်များပေါ်တွင် အခွဲ လောင်းကြေး-0နှင့် 3၊ 12 နှင့် 15 နှင့် 32 နှင့် 35
ဂျူး (Jeu) -0ဧရိယာ လောင်းကြေးများ
ဂျူးဇီးရိုး (Jeu Zero) 0၊3အခွဲ 1
12၊ 15 အခွဲ 1
26 ရိုးရိုး 1
32၊ 35 အခွဲ 1
ဗွိုင်စင်ဒူဇီးရိုး (Voisins du Zero) ဧရိယာ
နံပါတ် 17 ခု ပါသည်- 22 18၊ 29၊ 7၊ 28၊ 12၊ 35၊ 3၊ 26၊ 0၊ 32၊ 15၊ 19၊ 4၊ 21၊2နှင့် 25 (22 မှ 25)
နံပါတ်များပေါ်တွင် အခွဲ လောင်းကြေး-4နှင့် 7၊ 12 နှင့် 15၊ 18 နှင့် 21၊ 19 နှင့် 22 နှင့် 32 နှင့် 35
နံပါတ်များပေါ်တွင် စတွိ လောင်းကြေး- 0၊2နှင့် 3
နံပါတ်များပေါ်တွင် ကော်နာ လောင်းကြေး- 25၊ 26၊ 28 နှင့် 29
ဗွိုင်စင်ဒူဇီးရိုး (Voisins du Zero) ဧရိယာ ကြေးများ
ဗွိုင်စင်ဒူဇီးရိုး (Voisins du Zero) 0၊ 2၊3စတွိ 2
4၊7အခွဲ 1
25၊ 26၊ 28၊ 29
အော်ဖီလင်း (Orphelins) ဧရိယာ
သီးခြား ဧရိယာနှစ်ခုတွင် နံပါတ် 8 ခုကို ရွေးပါ-
- 1၊ 20၊ 14၊ 31 နှင့်9(1 မှ 9)
- 6၊ 34 နှင့် 17 (6 မှ 17)
နံပါတ် 1 ပေါ်တွင် ရိုးရိုး လောင်းကြေး-
နံပါတ်များပေါ်တွင် အခွဲ လောင်းကြေး-6နှင့် 9၊ 14 နှင့် 17၊ 17 နှင့် 20 နှင့် 31 နှင့် 34
အော်ဖီလင်း (Orphelins) ဧရိယာ ကြေးများ
အော်ဖီလင်း (Orphelins) 1 ရိုးရိုး 1
တိုင်ရာဒူဆလင်ဒါ (Tiers du Cylindre) ဧရိယာ
နံပါတ် 12 ခု ပါသည်- 27၊ 13၊ 36၊ 11၊ 30၊ 8၊ 23၊ 10၊ 5၊ 24၊ 16 နှင့် 33
နံပါတ်များပေါ်တွင် အခွဲ လောင်းကြေး-5နှင့် 8၊ 11 နှင့် 10၊ 13 နှင့် 16၊ 23 နှင့် 24၊ 27 နှင့် 30၊ 33 နှင့် 36
တိုင်ရာဒူဆလင်ဒါ (Tiers du Cylindre) ဧရိယာ လောင်းကြေးများ
တိုင်ရာဒူဆလင်ဒရီ (Tiers du Cylindre) 5၊ 8
2.4.2 အနီးအပါး လောင်းကြေးများ
အနီးအပါးကြေးများသည် ကစာသူအား ရေးထားသော နံပါတ်တစ်ခုနှင့် အနီးဝန်းကျင် နံပါတ်များအပေါ် ရိုးရိုး ကြေးများ တင်နိုင်စေပါသည်။ ကစားသူသည် ရွေးထားသော နံပါတ်၏ ဘယ်နှင့် ညာရှိ နံပါတ်3ခုအထိ ရွေးနိုင်ပြီး လောင်းကြေးများ တင်နိုင်ပါသည်။
အနီးအပါး 1 ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း
ကစားသူသည် မတူညီသော နံပါတ်3ခုအပေါ် ရိုးရိုး လောင်းကြေးများ တင်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- ကစားသူသည် နံပါတ်0ပေါ်ရှိ အနီးအပါး လောင်းကြေး 1 ခုကို ရွေးရပါသည်။ လောင်းကစားခြင်း နံပါတ်များမှာ 26၊0နှင့် 32 ဖြစ်ပါသည်။
အနီးအပါး2ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း
ကစားသူသည် မတူညီသော နံပါတ်5ခုအပေါ် ရိုးရိုး လောင်းကြေးများ တင်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- ကစားသူသည် နံပါတ်0ပေါ်ရှိ အနီးအပါး လောင်းကြေး2ခုကို ရွေးရပါသည်။ လောင်းကစားခြင်း နံပါတ်များမှာ 3၊ 26၊ 0၊ 32 နှင့် 15 ဖြစ်ပါသည်။
အနီးအပါး3ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း
ကစားသူသည် မတူညီသော နံပါတ်7ခုအပေါ် ရိုးရိုး လောင်းကြေးများ တင်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- ကစားသူသည် နံပါတ်0ပေါ်ရှိ အနီးအပါး လောင်းကြေး3ခုကို ရွေးရပါသည်။ လောင်းနေသော နံပါတ်များမှာ 35၊ 3၊ 26၊ 0၊ 32၊ 15 နှင် 19 ဖြစ်သည်။
2.4.3 ပွဲသိမ်း လောင်းကြေးများ
ဇာတ်သိမ်းကြေးများသည် ကစားသူအား တူညီသော ဂဏန်းဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် နံပါတ်များစွာအပေါ် ရိုးရိုးကြေးများ ထပ်နိုင်စေပါသည်။
ပွဲသိမ်း လောင်းကစားခြင်း 0။ လောင်းကစားခြင်း နံပါတ်များမှာ 0၊ 10၊ 20 နှင့် 30 ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲသိမ်း လောင်းကစားခြင်း 1။ လောင်းကစားခြင်း နံပါတ်များမှာ 1၊ 11၊ 21 နှင့် 31 ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲသိမ်း လောင်းကစားခြင်း 8။ လောင်းနေသော နံပါတ်များမှာ 8၊ 18 နှင့် 28 ဖြစ်သည်။
2.5 ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား
အနီ အနီရောင်နံပါတ်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 1
အနက် အနက်ရောင်နံပါတ်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 1
စုံ စုံနံပါတ်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 1
မ မနံပါတ်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 1
နိမ့် နံပါတ် 1-18 အထိ အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 1
မြင့် နံပါတ် 19-36 အထိ အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 1
ပထမ ဒိုဇန် နံပါတ် 1-12 အထိ အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 2
ဒုတိယ ဒိုဇန် နံပါတ် 13-24 အထိ အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 2
တတိယ ဒိုဇန် နံပါတ် 25-36 အထိ အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 2
ကော်လံအတွင်းဘက် လောင်းကြေးများ ကော်လံ3ခုအနက် တစ်ခုခုမှ နံပါတ် 12 ခု အကျုံးဝင်သည် 1 အတွက် 2
ရိုးရိုး0အပါအဝင် တစ်ခုတည်းသော နံပါတ် တစ်ခုခု ပါဝင်သည်။ 1 အတွက် 35
အခွဲ စားပွဲပေါ်ရှိ ကပ်လျက် နံပါတ်2ခု အကျုံးဝင်သည် 1 အတွက် 17
စတွိ စားပွဲတစ်လျှောက်ရှိ လိုင်းတစ်ခုရှိ3နံပါတ် အားလုံး အကျုံးဝင်သည် 1 အတွက် 11
ကော်နာ စားပွဲပေါ်ရှိ ကပ်လျက် နံပါတ်4ခုလုံး အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 8
ဆစ်လိုင်း စားပွဲပေါ်ရှိ ကပ်လျက် နံပါတ်6ခုလုံးမှ ဘလော့ခ်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။ 1 အတွက် 5
ဇီးရိုးဆက်ရှင် သီးခြား အနိုင် နံပါတ်လေးခုမှ တစ်ခုအပေါ်ရှိ ကြေးတစ်ခု အကျုံးဝင်သည်။ ဇီးရိုးဆက်ရှင် ကြေး 1 ခုတည်းသာ ရှိပါသည်။ ၎င်းနံပါတ်များမှာ 0၊ 1၊ 2၊3တို့ ဖြစ်သည်။ 1 အတွက် 8
ဇီးရိုးကော်နာ သီးခြား အနိုင် နံပါတ်သုံးခုမှ တစ်ခုအပေါ်ရှိ ကြေးတစ်ခု အကျုံးဝင်သည်။ ဇီးရိုး ကော်နာ ကြေးနှစ်ခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ 0၊ 1၊2နှင့် 0၊ 2၊3တို့ ဖြစ်သည်။ 1 အတွက် 11
2.6 အများဆုံးနှင့် အများဆုံးကြေးများ
2.7 ဘီးစလှည့်ခြင်းနှင့် ရလဒ် ညွှန်ပြခြင်း
လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့်၊ ဖဲဝေသူသည် စကစားရန် ဘီးထဲတွင် ဘောလုံးကို လှည့်ပါမည်။ ဘောလုံးသည် ဘီးပေါ်ရှိ အိတ်များထဲသို့ မကျမီ အနည်းဆုံး 10 ပတ် လည်ရပါမည်။ ဘီးပေါ်ရှိ အိတ်တစ်ခုအတွင်းသို့ ဘောလုံး ကျသွားပါက၊ ၎င်းအား ကွန်ပျူတာက စကန်ဖတ်ပြီး ရလဒ်အား ကစားသူ၏ စခရင်ပေါ်တွင် ပြသပါမည်။
စနစ်သည် အနိုင်နံပါတ်ကို ပြသပြီး အနိုင်ကြေးအားလုံးအား မာကာဖြင့် စားပွဲ အဆင်အပြင်ပေါ်တွင် အရောင်ခြည်ပြသွားပါမည်။ အနိုင်ကြေးများတွင် ၎င်းတို့အပေါ်၌ တင်ထားသည့် မာကာချပ်ပြား ရှိပါမည်။ ရှုံးသော ကြေးအားလုံးကို သိမ်းပြီး နိုင်သော ကြေးအားလုံးကို ပေးပါသည်။ ကြေးက အနိုင်ရသူဖြစ်ပါက၊ ကစားသူ၏ အနိုင်ငွေများအား ကစားသူ၏ ခရက်ဒစ် လက်ကျန်သို့ ပေးပို့ပြီး ၎င်းတို့၏ နောက်ထပ် ကစားနည်းကို ရွေးပြီးနောက် သို့မဟုတ် ဧည့်ခန်းသို့ ပြန်သွားပြီးနောက် ခရက်ဒစ်များ ပြသချက်တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်သွားပါမည်။
ယခင် အနိုင် နံပါတ်များ၏ မှတ်တမ်းအား ကစားသူ၏ စခရင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ရှိ ဝင်းဒိုးပေါ်တွင် ပြသပါသည်။ မှတ်တမ်း စားပွဲတွင် မတူညီသော အရောင် နံပါတ်သုံးခု ရှိပါသည်။ အနက်ရောင်နံပါတ်သည် ၎င်းတို့က အနက်ရောင် နံပါတ်အစုံနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အနီရောင်နံပါတ်သည် ၎င်းတို့က အနီရောင် နံပါတ်အစုံနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုလိုပြီး အစိမ်းရောင်နံပါတ်မှာ '0' အတွက် ဖြစ်သည်။
2.8 အီလက်ထရွန်းနစ် ချွတ်ယွင်းချက်များ
တိုက်ရိုက် ရောက်လက် အီလက်ထရွန်းနစ် ပြသချက်၏ ချွတ်ယွင်းချက် တစ်ခုခု ရှိသည့်အခါ၊ ရောက်လက် ဘီးက ဆုံးဖြတ်သည့် အမှန်တကယ် ရလဒ်နှင့်အညီ ရလဒ်အား စာရင်းရှင်းသွားပါမည်။
ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ပြဿနာများ အကန့်အသတ်မရှိ အပါအဝင် ကစားသူ၏ စက်ပစ္စည်း ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခု၊ ကစားပွဲ ရလဒ်ကို ပျက်ပြယ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ ကစားသူများက အစီရင်ခံစာ အပိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် လောင်းကြေး မှတ်တမ်းကို စစ်နိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက် ရောက်လက်အတွင်း SBOBET စနစ် ချွတ်ယွင်းချက် နှင့် / သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုက ကစားပွဲကို ပျက်ပြယ်စေပြီး သီးသန့် စားပွဲကို ပိတ်ပါမည်။
2.9 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ
SBOBET ကာစီနိုသည် ဖဲဝေသူ လှည့်ပတ်မှု အမှား သို့မဟုတ် ရောက်လက်ဘီး၏ အမှား ရှိသည့်အခါတွင် လှည့်ပတ်မှု မမှန်ကြောင်း ကြေညာခွင့်ရှိသည်။ တိုက်ရိုက် လောင်းကစား ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးတွင် မှားလှည့်ခြင်းများမှာ ရှောင်လွှဲမရနိုင်ဘဲ မှားလှည့်ခြင်းများ ဖြစ်သည့်အခါ ဘောလုံးကို အစားထိုးပြီး ပြန်လှည့်ကာ သက်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကို ပြန်စပါသည်။
ဘောလုံးသည် ဘီးပေါ်ရှိ အိတ်များထဲသို့ မကျမီ အနည်းဆုံး အပတ်ရေ 10 ပတ် လည်ရပါမည်။ အနည်းဆုံး အပတ်ရေ 10 ပတ် မလည်မီ အိတ်ထဲသို့ ကျသွားသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ သက်ဆိုင်ရာ အလှည့်အား ဖျက်သိမ်းပါမည်။
ဘီးအပြင်ဘက်သို့ ဘောလုံး ပြုတ်ကျသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ဖဲဝေသူသည် ဘောလုံးကို ပြန်လှည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအလှည့်အား ပြန်စပါမည်။
ဖဲဝေသူသည် ဘီးလည်နေသည့် ဦးတည်ရာအတိုင်း ဘောလုံးကို လှည့်သည့်ဖြစ်ရပ်တွင်၊ သက်ဆိုင်ရာအလှည့်အား ပြန်စပါမည်။
ဘီးပေါ်ရှိ အိတ်အပြင်ဘက်သို့ ဘောလုံး ပြုတ်ကျသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ဖဲဝေသူသည် ဘောလုံးကို ပြန်လှည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအလှည့်အား ပြန်စပါမည်။
ကစားသူများသည် ကစားပွဲ ရလဒ်များကို ငြင်းခုံရန် ဆန္ဒရှိပါက SBOBET ကာစီနို၊ ကစားချိန်၊ စားပွဲ ID၊ ဖဲဝေသူ၏ အမည်နှင့် အလှည့်နံပါတ်တို့အား ပြောပြရပါမည်။ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းက SBOBET ကာစီနို၏ တိုင်ကြားချက် ပယ်ချခံရခြင်းကို ခံရနိုင်ပါသည်။ ဘောလုံးနှင့် လည်နေသော ဘီး၏ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံအား 24 နာရီကြာ သိမ်းဆည်းပါသည်။ ကစားသူများသည် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားချက်ကို သတင်းပို့ရပါမည်။ 24 နာရီနောက်ပိုင်းတွင် တင်ပြသည့် တိုင်ကြားချက်များအား နောက်ထပ် ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ SBOBET ကာစီနိုက ပယ်ချသွားပါမည်။
3. တိုက်ရိုက် ဆစ်ဘို
ကစားပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အန်စာတုံး သုံးခု၏ ရလဒ်ကို အောင်မြင်စွာ လောင်းရန် ဖြစ်သည်။ စားပွဲပေါ်တွင် လောင်းကြေးများစွာ တင်နိုင်ပါသည်။ ကစားသူသည် အချိုးအစားများစွာဖြင့် တစ်မှ ငါးဆယ့်ငါးအတွင်း ကြေးတစ်ခုခုတင်ရန် ရွေးစရာရှိပါသည်။
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဆစ်ဘိုတွင်၊ ကစားသူအား အန်စာတုံးကို လှုပ်ခါနေသည့် တိုက်ရိုက်လူတစ်ဦးဖြင့် တင်ဆက်ပါသည်။ စိတ်ချရပြီး နားလည်လွယ်စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရလဒ်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာက ထုတ်ပေးသော ဂရပ်ဖစ်များဖြင့် ပြသပါသည်။
အယူအဆအရ ဤကစားနည်း၏ ကစားသူထံ ပြန်ပေးမှုမှာ 96.21% ဖြစ်သည်။
အချိန်ကာလ ကြာသည့်အခါ၊ တင်ထားသည့် စုစုပေါင်း ကြေးများအတွက် ကစားသူထံ ပျမ်းမျှ ပြန်ပေးမှုမှာ 96.06% ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
3.2 ပါဝင်ကစားမှု ညွှန်ကြားချက်များ
ကစားသူတွင် အန်စာတုံး သုံးလုံး လှိမ့်သည့် ရလဒ်အပေါ်တွင် လောင်းကြေး ငါးဆယ့်နှစ်ခုအထိ ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါသည်။ ရလဒ်မှာ အန်စာတုံး သုံးလုံး၏ ပေါင်းခြင်းအပေါ် အခြေခံပြီး ဇယား2တွင် အကြမ်းဖော်ပြထားသည့် ကစားသူက တင်နိုင်သော ဖြစ်နိုင်သည့် လောင်းကြေးများဖြင့် အောက်ပါ ဇယား 1 တွင် အကြမ်းဖော်ပြထားသည့် လောင်းကစား နယ်ပယ်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
ကြေးနှစ်ဆ ခလုတ်သည် စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားပြီးဖြစ်သည့် အတည်ပြုမထားသော ကြေးအားလုံးကို နှစ်ဆ တင်နိုင်စေပါမည်။ တင်ထားပြီး အတည်ပြုထားသော ကြေးအားလုံးအား နှစ်ဆတင် မရနိုင်ပါ။
3.3 လောင်းကစားခြင်း နယ်ပယ်များ
အောက်ပါ ဇယား 1 သည် ဇယား2အား ကိုးကားသည့် လောင်းကစားခြင်း နယ်ပယ်များကို သရုပ်ပြပါသည်။ စာလုံးများသည် လောင်းကစားခြင်း နယ်ပယ်မျိုးစုံကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဤလောင်းကစားခြင်း နယ်ပယ်များအတွင်း ရနိုင်သည့် ကြေးမျိုးစုံအား လောင်းကြေး ဖော်ပြချက်များတွင် ရှင်းပြထားပါသည်။
ဇယား 1 - လောင်းကစားခြင်း နယ်ပယ်များ
3.4 ကြေး ဖော်ပြချက်များ
အထက်ပါ ဇယား 1 ဂရစ်ဖစ်တွင် ဖော်ထုတ်ထားသည့် လောင်းကစားခြင်း နယ်ပယ်များတွင် ရနိုင်သည့် ကြေးမျိုးစုံအား အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည်-
ဇယား2- ကြေးများ
တစ်ခုတည်းသော နံပါတ် အန်စာတုံး 1 တုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်သည် လောင်းထားသည့် နံပါတ်နှင့် ကိုက်ညီပါမည်။
အန်စာတုံး2တုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်သည် လောင်းထားသည့် နံပါတ်နှင့် ကိုက်ညီပါမည်။
အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်သည် လောင်းထားသည့် နံပါတ်နှင့် ကိုက်ညီပါမည်။
အန်စာနှစ်တုံး အရော အန်စာတုံး3တုံးမှ2တုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များသည် လောင်းထားသည့် နံပါတ်များနှင့် ညီမျှသည်။
စုစုပေါင်း4သို့မဟုတ် 17 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ4သို့မဟုတ် 17 နှင့် ညီမျှပါမည်။
စုစုပေါင်း5သို့မဟုတ် 16 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ5သို့မဟုတ် 16 နှင့် ညီမျှပါမည်။
စုစုပေါင်း6သို့မဟုတ် 15 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ6သို့မဟုတ် 15 နှင့် ညီမျှပါမည်။
စုစုပေါင်း7သို့မဟုတ် 14 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ7သို့မဟုတ် 14 နှင့် ညီမျှပါမည်။
စုစုပေါင်း 8 သို့မဟုတ် 13 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ 8 သို့မဟုတ် 13 နှင့် ညီမျှပါမည်။
စုစုပေါင်း9သို့မဟုတ် 12 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ9သို့မဟုတ် 12 နှင့် ညီမျှပါမည်။
စုစုပေါင်း 10 သို့မဟုတ် 11 ရှိသည့် အန်စာတုံး3တုံး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ 10 သို့မဟုတ် 11 နှင့် ညီမျှပါမည်။
နှစ်ဆတိုင်း အန်စာတုံး3တုံးမှ2တုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်မှာ တူညီပါမည်။
သုံးဆတိုင်း အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်မှာ တူညီပါမည်။
သတ်မှတ် သုံးဆ အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်သည် လောင်းထားသည့် နံပါတ်နှင့် ညီမျှပါမည်။
အသေး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ4မှ 10 နှင့် ညီမျှပါမည် (သုံးဆများ ရှုံးသည်)။
စုံ အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ သုံးဆ၏ ခြွင်းချက်ဖြင့် စုံ ဂဏန်းဖြစ်ပါမည် (သုံးဆများ ရှုံးသည်)။
အကြီး အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ 11 မှ 17 နှင့် ညီမျှပါမည်။
မ အန်စာတုံး3တုံးလုံးပေါ်ရှိ နံပါတ်များ၏ ပေါင်းခြင်းမှာ သုံးဆ၏ ခြွင်းချက်ဖြင့် မ ဂဏန်းဖြစ်ပါမည် (သုံးဆများ ရှုံးသည်)။
3.5 အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး ကြေးများ
3.6 အီလက်ထရွန်းနစ် ချွတ်ယွင်းချက်များ
တိုက်ရိုက် ဆစ်ဘို အီလက်ထရွန်းနစ် ပြသချက်၏ ချွတ်ယွင်းချက် တစ်ခုခု ရှိသည့်အခါ၊ အန်စာတုံးက ဆုံးဖြတ်သည့် အမှန်တကယ် ရလဒ်နှင့်အညီ ရလဒ်အား စာရင်းရှင်းသွားပါမည်။
တိုက်ရိုက် ဆစ်ဘိုအတွင်း အော်ပရေတာ စနစ် ချွတ်ယွင်းချက် နှင့် / သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုက ကစားပွဲကို ပျက်ပြယ်စေပြီး သီးသန့် စားပွဲကို ပိတ်ပါမည်။
3.7 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ
လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ခါခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လူ သို့မဟုတ် လူမဟုတ်သော အမှားများ ဖြစ်ပါက အန်စာတုံးကို ပြန်လှိမ့်ရန် သို့မဟုတ် ပြန်လှုပ်ခါရန် သို့မဟုတ် လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ခါခြင်း မမှန်ကြောင်း ကြေညာရန် အော်ပရေတာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ကစားသူများသည် ကစားပွဲ ရလဒ်များကို ငြင်းခုံရန် ဆန္ဒရှိပါက SBOBET ကာစီနို၊ ကစားချိန်၊ စားပွဲ ID၊ ဖဲဝေသူ၏ အမည်နှင့် အလှည့်နံပါတ်တို့အား ပြောပြရပါမည်။ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းက SBOBET ကာစီနို၏ တိုင်ကြားချက် ပယ်ချခံရခြင်းကို ခံရနိုင်ပါသည်။ အန်စာတုံး ရလဒ်၏ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံအား 24 နာရီကြာ သိမ်းဆည်းပါသည်။ ကစားသူများသည် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားချက်ကို သတင်းပို့ရပါမည်။ 24 နာရီနောက်ပိုင်းတွင် တင်ပြသည့် တိုင်ကြားချက်များအား နောက်ထပ် ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ SBOBET ကာစီနိုက ပယ်ချသွားပါမည်။
4. တိုက်ရိုက် ဘလက်ဂျက်
4.1 တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဘလက်ဂျက်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
ဂိမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုများ၏ စုစုပေါင်း ရမှတ်တန်ဖိုးအား 21 ကို မကျော်စေဘဲ ဟောက်စ်ဖဲချပ်အစု၏ စုစုပေါင်း ရမှတ်တန်ဖိုးထက် ကျော်ရန် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ဖဲချပ်စုရှိသူက ကစားပွဲကို အနိုင်ရပါသည်။
ကစားသူများစွာက တူညီသော ခုံပေါ်တွင် ကြေးများ တင်နိုင်ပါသည်။ တူညီသော ခုံပေါ်ရှိ ကစားသူတစ်ဦးစီသည် မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ယင်းအား ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲသူ ကြားခံစနစ် ဇယားကွက်တွင် ပြသထားသည့် ဖဲချပ်များဖြင့် ပြသပါမည်။ လုပ်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် တူညီသော ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ကစားနေသော ကစားသူများစွာ ရှိသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်ခုံအတွက် အခြား ဖဲချပ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇယားက ပြသနိုင်ပါသည်။
ကစားသူသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ဖဲချပ်များအတွက် သူ၏ သုံးစွဲသူ ကြားခံစနစ် စားပွဲအား အမြဲတမ်း ကိုးကားရပါမည်။
အယူအဆအရ ဤကစားနည်း၏ ကစားသူထံ ပြန်ပေးမှုမှာ 96.57% ဖြစ်သည်။
အချိန်ကာလ ကြာသည့်အခါ၊ တင်ထားသည့် စုစုပေါင်း ကြေးများအတွက် ကစားသူထံ ပျမ်းမျှ ပြန်ပေးမှုမှာ 96.11% ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
4.2 ပါဝင်ကစားမှု ညွှန်ကြားချက်များ
ကြေးတင်ရန်၊ ကစားသူသည် ဂိမ်း ဝင်းဒိုး၏ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ချပ်ပြားများ၏ ပုံများသို့ ကာဆာကို ရွှေ့ပြီး အသုံးပြုလိုသည့် ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို ဘယ်ကလစ် နှိပ်ပါ။ ချပ်ပြားသည် ယှဉ်လျက်ရေးသားထားသော ကြေး၏ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးနှင့်အတူ လောင်းကစားခြင်း စက်ဝိုင်းပေါ်တွင် အလိုအလျောက် ပေါ်လာပါမည်။ ကြေးပမာဏသည် ဝင်းဒိုး၏ အောက်ခြေတွင်လည်း ပေါ်လာပါမည်။
ချပ်ပြား ရလာချိန်တွင် အာမခံအပေါ် ကြေးတင်ရန် ချပ်ပြားပေါ်တွင်လည်း ကစားသူက ကလစ်နှိပ်နိုင်ပါသည်။ ချပ်ပြားပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းသည် ချပ်ပြားအား အာမခံ ပေးချေမှုများ - 1 အတွက်2ဟု မှတ်သားထားသည့် ဧရိယာတွင် အလိုအလျောက် ပေါ်လာစေပါမည်။
ဘယ်ကလစ် တစ်ချက်စီသည် ယင်းစားပွဲ၏ အများဆုံး ကြေးအထိ ကြေးတန်ဖိုးအား တူညီသော တန်ဖိုး၏ ချပ်ပြားတစ်ခုဖြင့် တိုးမြှင့်ပေးပါမည်။ ကစားသူသည် ဤကြေး၏ မတူညီသော ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို အသုံးပြုလိုပါက၊ ၎င်းအနေဖြင့် စခရင်ပေါ်ရှိ ဂိမ်း ဝင်းဒိုး၏ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ချပ်ပြားများ၏ ပုံများသို့ ကာဆာကို ရွှေ့ပြီး လောင်းကစား စက်ဝန်းတွင် အလိုအလျောက်ထားရန် အသုံးပြုလိုသည့် ချပ်ပြားတန်ဖိုးအသစ်ပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ် နှိပ်ရပါမည်။
ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ အောက်ဘယ်ထောင့်ရှိ စက္ကန့် 30 လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ၎င်းတို့၏ လောင်းကြေးများကို မဖြစ်မနေ တင်ရပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့် လောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။
အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီး 'ကြေးအား အတည်ပြုပြီးပါပြီ' မက်ဆေ့ချ် ပြသခြင်းဖြင့် စနစ်က အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုပြီး ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ထည့်ပေးပါသည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ထည့်သွင်းမှု အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးနောက်ပိုင်း တင်ထားသော ကြေးအားလုံးမှာ နှိပ်နေခဲ့သည့် ကြေးအတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ထိုသို့မပြီးစီးပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
ယခင် အလှည့်အတွက် တင်ထားသည့်အတိုင်း တူညီသော ကြေးတင်ရန်၊ ထပ်လုပ်ရန် ခလုတ်အား ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
စားပွဲ အဆင်အပြင်မှ ကြေးအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန် (CANCEL) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ အတည်ပြုရန် (CONFIRM) သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းမှု အတည်ပြုရန် (CONFIRM ADD) ခလုတ်ကို ဘယ်ကလစ်မနှိပ်မီ ၎င်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားပါ။ ပယ်ဖျက်ရန် (CANCEL) ကို ဘယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့်၊ ဖဲဝေသူသည် ကစားသူများ၏ ဖဲချပ်စုနှင့် ဒိုင်များ၏ ဖဲချပ်စုဟုခေါ်သည့် ကြေးတင်ထားသည့် ပါဝင်ကစားသူ အကွက်များထံ ဖဲချပ်စုတစ်ခုနှင့် ဒိုင်ထံ တစ်ခု စုစုပေါင်း ဖဲချပ်စု နှစ်ခုကို ဝေပါမည်။ ဖဲချပ်အားလုံးအား လှန်ပြ၍ ဝေပါမည်။ ဖဲချပ်များအား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆွဲပါမည်။
ကစားသူများ၏ ဖဲချပ်စုအားလုံးအတွက် ပထမဆုံး ဖဲချပ်။
ဖဲဝေသူ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ပထမဆုံး ဖဲချပ်။
ကစားသူများ၏ ဖဲချပ်စုအားလုံးအတွက် ဒုတိယ ဖဲချပ်။
ကစားသူ၏ ပထမဆုံး ဖဲချပ်မှာ အေ့စ် ဖဲချပ်စု ဖြစ်သည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ကစားသူများသည် အာမခံ လောင်းကစားခြင်းတွင် ပါဝင်ရန် ကမ်းလှမ်းခံရပါမည်။ ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ အောက်ဘယ်ထောင့်ရှိ စက္ကန့် 10 လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ၎င်းတို့၏ အာမခံ လောင်းကြေးများကို မဖြစ်မနေ တင်ရပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့် လောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။
ကစားသူများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့်၊ တတိယနှင့် ထပ်ဆောင်း ဖဲချပ်များအား ဖဲဝေသူက ၎င်းတို့၏ ဖဲချပ်စု(များ) သို့ ဆွဲပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဖဲချပ်စု(များ) ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်၊ ကစားသူများသည် မောက်စ်ကို အသုံးပြု၍ ထပ်ဆောင် ဖဲချပ်များကို တောင်းဆို သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။ ကစားသူများသည် လက်ရှိ ဖဲချပ်စုကို ထိန်းထားရန်ငှာ နောက်တစ်ချပ် ဆွဲရန် ထိနှိပ် ခလုတ် သို့မဟုတ် မဆွဲတော့ ခလုတ်ပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ်ကို နှိပ်ပါ။
ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ အောက်ဘယ်ထောင့်ရှိ 8 စက္ကန့် ဆုံးဖြတ်ချက် တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ကစားသူများက ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ရပါမည် သို့မဟုတ် တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့် အလိုအလျောက် 'မဆွဲတော့' ဖြစ်ပါမည်။
ကစားသူအားလုံး၏ ဖဲချပ်စုအားလုံး ဖဲသေ သို့မဟုတ် အရှုံးပေးရသည့် ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ ကစားသူများသည် ဖဲဝေသူ၏ ဖဲချပ်စုသို့ ထပ်ဆောင်း ဖဲချပ်များ ဝေမပေးရပါ။
ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုအား တစ်ကြိမ်သာ ခွဲခွင့်ပြုပါသည်။
4.3 ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား
အနိုင်ရသော ဘလက်ဂျက်များက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား2အတွက်3(1 အတွက် 1.5) ကို ရရှိသည်။
အနိုင်ရသော အာမခံ ကြေးများက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက်2ကို ရရှိသည်။
အခြား အနိုင်ရသော ဖဲချပ်စုအားလုံးက ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 1 အတွက် 1 ရရှိသည် (အချိုးတူ)။
4.4 အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံးကြေးများ
ကစားသူက ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ဤ ကစားနည်း၏ ကစားနည်း စည်းမျဉ်းများ မီနျူးအတွင်းသာ အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး ကြေး ကန့်သတ်ချက်များကိုသာ ပြသပါမည်။
4.5 ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများ
အောက်ပါ ဇယားကွက် 1 တွင် ပြသထားသည့်အတိုင်း ဘလက်ဂျက် ကစားနည်းတွင် ဖဲဝေသူ၏ ဖဲချပ်စုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများ ရှိပါသည်။ ဖဲဝေသူသည် စုစုပေါင်း 16 သို့မဟုတ် ယင်းအောက်ရှိသည့် ဖဲချပ်စုကို မဖြစ်မနေ ဆွဲရပြီး စုစုပေါင်း 17 (အသေးစား 17 အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အထက်ဆိုပါက မဆွဲရတော့ပါ။
ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုအတွက် ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများ မရှိပါ။ ကစားသူသည် ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း ဖဲချပ်နည်းနည်း သို့မဟုတ် များများ ဆွဲနိုင်သည် (ဖဲဝေသူတွင် ဘလက်ဂျက် ရှိပါက သို့မဟုတ် ကစားသူ ဖဲသေသည်မှ လွဲ၍)။
စားပွဲ I - ဖွဲဝေသူ၏ ဖဲချပ်စု
338 ဆွိ တိုက်ရိုက် ဘလက်ဂျက်
သရေ သို့မဟုတ် မဆွဲတော့
2 - 16 ထိနှိပ်
17 နှင့် အထက် မဆွဲတော့
နံပါတ်2မှ 10 ရှိသော ကတ်အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ပုံပါတန်ဖိုးအတိုင်း ဖြစ်သည်။
"ရုပ်ပုံဖဲချပ်များ" အားလုံး (ဂျက်များ၊ ကွင်းများနှင့် ကင်းများ) သည် 10 နှင့် ညီမျှသည်။
21 မကျော်ဘဲ အမြင့်ဆုံးစုစုပေါင်း တန်ဖိုးထုတ်ပေးမှုအပေါ် မူတည်၍ အေ့စ်အားလုံးသည် 1 သို့မဟုတ် 11 နှင့် ညီမျှသည်။
6 နှင့်9ဖဲချပ်များကြား ကွဲပြားမှုကို လိုက်နာရန် ကစားသူများအား တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
4.7 ဘလက်ဂျက် စည်းမျဉ်းများ
ကစားနည်း၏ အမည်လည်းဖြစ်သည့်၊ ဘလက်ဂျက်သည် အကောင်းဆုံး ဖဲချပ်စု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကနဦး နှစ်ချပ်အစုတွင် အေ့စ်များနှင့် တစ်ဆယ်တန်ဖိုးရှိသော ဖဲချပ် ပါဝင်ပါသည်။ ကစားသူ သို့မဟုတ် ဟောက်စ်အတွက် ဖြစ်စေ၊ ဘလက်ဂျက် ဖြစ်လာသောအခါ အခြား အချပ်များကို မဆွဲရပါ။ နောက်ထပ် ဘလက်ဂျက်တစ်ခုမှလွဲ၍ ဘလက်ဂျက်မှာ အလိုအလျောက် အနိုင်ရသူဖြစ်ပါသည်၊ ဤအခြေအနေတွင် ဖဲချပ်စုမှာ အကုန်ထည့် ဖြစ်သည် (သရေ သို့မဟုတ် ဆက်လုပ်ဟုလည်း ခေါ်သည်)။
အချိုးတူအား ဘလက်ဂျက်ရှိသည့် ကစားသူထံ ပေးအပ်ပါသည်။ အချိုးတူသည် ကစားသူအား ဟောက်စ် ဖဲချပ်စု၏ ရလဒ်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ 1 အတွက် 1 ဖြင့် အနိုင်ငွေကို တောင်းဆိုရန် ကမ်းလှမ်းပါသည်။
ကစားသူ သို့မဟုတ် ဟောက်စ်က ထပ်ဆောင်း အချပ်များစွာကို ဆွဲလျှင် ပေါင်းခြင်း 21 ထက် ကျော်ပြီး ဖဲချပ်စုတွင် "များလွန်း" နေကာ ဖဲသေသည်ဟု ယူဆခံရနိုင်သည်။ ဖဲသေသော ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုမှာ အလိုအလျောက် ရှုံးပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ချိန်တွင်၊ ဟောက်စ်သည် ဟောက်စ် ဖဲချပ်အတွက် တတိယ သို့မဟုတ် ထပ်ဆောင်း အချပ်များ ဆွဲမည် မဟုတ်ဘဲ၊ ယင်း ဟောက်စ်မှာ ပြီးစီးပါသည်။
နှစ်ဆ အချပ်တိုင်းတွင်၊ ကစားသူသည် ၎င်းတို့၏ကြေးကို နှစ်ဆတင်ရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းက ကစားသူအား နှစ်ဆနိုင်ရန် အခွင့်အရေး ပေးပါသည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို ရနိုင်ကြောင်း ကစားသူအား အကြံပေးရန် ဂိမ်းဝင်းဒိုးရှိ နှစ်ဆ ခလုတ် မီးလင်းပါမည်။ ကစားသူသည် နှစ်ဆတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ၎င်းတို့က ဤနှစ်ဆပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ် နှိပ်နိုင်ပြီး ကနဦး ကြေးနှင့် ညီမျှသည့် တန်ဖိုးအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ကနဦးကြေးနှင့်အတူ ထပ်ဆောင်းကြေးကို တင်ပါမည်။ ဖဲချပ်တစ်ခုအား ကစားသူ၏ ဖဲချပ်စုသို့ အလိုအလျောက် ဝေပါမည်။ ထပ်ဆောင်း ဖဲချပ်တစ်ခုထက်ပို၍ ဆွဲရန် ကစားသူအား ခွင့်ပြုမထားပါ။ ကစားသူ နှစ်ဆမတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ဂိမ်းအား ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သွားပါမည်။
ကစားသူသည် ထပ်ဆောင်း အချပ်(များ) ဆွဲမည်ဟုဆိုလိုသည့် ဆွဲရန် သို့မဟုတ် လက်ရှိ ဖဲချပ်စုကို ထိန်းရန်ဟု ဆိုလိုသည့် မဆွဲတော့ကို ရွေးရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ကစားသူသည် ဂိမ်းဝင်းဒိုးတွင် ပါသည့် ဆွဲရန် သို့မဟုတ် မဆွဲတော့ ခလုတ်များပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ် နှိပ်ခြင်းဖြင့် ဆွဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် မဆွဲနိုင်သည်။ ဟောက်စ်သည် ဖဲချပ်ဆွဲ စည်းမျဉ်းများအရ ဆွဲရန် သို့မဟုတ် မဆွဲတော့ကို ရွေးရမည်။
ပြလိုက်သော ဟောက်စ် ဖဲချပ်မှာ အေ့စ် ဖြစ်ပါက၊ ကစားသူသည် အာမခံ ဝယ်ရန် အခွင့်အရေး ရပါမည်။ ဤကြေးကို ရနိုင်ကြောင်း ကစားသူအား အကြံပေးရန် ဂိမ်းဝင်းဒိုးတွင် အာမခံ ခလုတ် မီးလင်းပါမည်။ အာမခံ ကြေးတင်ရန် ကစားသူသည် ချပ်ပြားပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ်ကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။ ကစားသူသည် အာမခံ ကြေးကို တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ဟောက်စ်တွင် ဘလက်ဂျက် မရှိပါက၊ ကစားသူက အာမခံကြေးအတွက် ထုတ်ပေးငွေ အချိုးအစား 2-1 ရရှိပြီး အာမခံကြေးအား ကစားသူသို့ ပြန်ပေးပါမည်။ ကစားသူသည် ကနဦးကြေးကို အမှန်တကယ် ဆုံးရှုံးပါမည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ ကစားသူက စုံဂဏန်းကို ဖျက်လိုက်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဟောက်စ်တွင် ဘလက်ဂျက် မရှိပါက၊ ကစားသူသည် အာမခံ ကြေးကို ဆုံးပြီးနောက် ကစားပွဲ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စပါသည်။
ကနဦး နှစ်ကတ် ဖဲချပ်စုသည် ဟောက်စ် ဖဲချပ်စုကို အနိုင်ယူရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ကစားသူ ခံစားရပါက၊ ကစားသူသည် အရှုံးပေးရန်ကို ရွေးနိုင်သည်။ ယင်းလုပ်ရပ်သည် ယင်းအခြေအနေရှိ ဖဲချပ်စုကို အပြီးသတ်စေပြီး ကနဦးကြေး၏ တစ်ဝက်ကို ဆုံးရှုံးပါမည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို ရနိုင်ကြောင်း ကစားသူအား အကြံပေးရန် ဂိမ်းဝင်းဒိုးရှိ အရှုံးပေး ခလုတ် မီးလင်းပါမည်။ ကစားသူသည် ဤခလုတ်ပေါ်တွင် ဘယ်ကလစ် နှိပ်နိုင်ပြီး မူလ ကြေးတစ်ဝက်အား ပြန်ရပါမည်။
ကစားသူ၏ ပထမ နှစ်ချပ်မှာ အဆင့်တူအချပ် ဖြစ်ပါက၊ အတွဲဟုခေါ်ပါသည်။ ၎င်းက ကစားသူအား ဖဲချပ်စုနှစ်ခုဖြင့် ကစားပြီး နှစ်ကြိမ်နိုင်စေရန် အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို ရနိုင်ကြောင်း ကစားသူအား အကြံပေးရန် ဂိမ်းဝင်းဒိုးရှိ ခွဲရန် ခလုတ် မီးလင်းပါမည်။ ကစားသူသည် ဤခလုတ်ပေါ်တွင် ယခု ဘယ်ကလစ် နှိပ်နိုင်ပြီး ကနဦးကြေးနှင့် ညီမျှသည့် တန်ဖိုးအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ကနဦးကြေးနှင့်အတူ ထပ်ဆောင်းကြေးကို တင်ပါမည်။ အတွဲကို ခွဲရန် ကစားသူ ဆုံးဖြတ်ပါက၊ တစ်ချပ်အား အခွဲ ဖဲချပ်စုနှစ်ခု၏ ပထမသို့ အလိုအလျောက် ဝေပေးပါမည်။ ထို့နောက်တွင် ကစားသူသည် ဆွဲရန် သို့မဟုတ် မဆွဲတော့ ခလုတ်များကို သုံး၍ ယင်း ဖဲချပ်စု ပြီးသည်အထိ ထပ်ဆောင်း ဖဲချပ်များကို ဆွဲရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါမည်။ အေ့စ်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းအတွက် ခြွင်းချက်၊ အခွဲ ဖဲချပ်စုတစ်ခုစီအတွက် ဖဲချပ်နောက်တစ်ခုကို ဆွဲပါမည်။ ကစားသူသည် အတွဲကို မခွဲရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ကစားနည်းအား ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လုပ်ပါသည်။
၎င်းမှာ ဘလက်ဂျက် ပြီးနောက် အကောင်းဆုံး ဖဲချပ်စုနောက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဖဲချပ် သုံးခု သို့မဟုတ် သုံခုအထက် ပါနိုင်ပြီး စုစုပေါင်းမှာ 21 ဖြစ်ပါသည်။
ဖဲဝေသူသည် ဖဲထုပ်အသစ်၏ အစတွင် ဖဲပစ်ခြင်းကို စတင်ပါမည်။ ဒိုင်သည် ကစားနည်းပွဲများအတွင်း ပစ်ဖဲကို မသုံးပါ။
4.10 အီလက်ထရွန်းနစ် ချွတ်ယွင်းချက်များ
တိုက်ရိုက် ဘလက်ဂျက်အတွင်း အော်ပရေတာ စနစ် ချွတ်ယွင်းချက် နှင့် / သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုက ကစားပွဲကို ပျက်ပြယ်စေပြီး သီးသန့် စားပွဲကို ပိတ်ပါမည်။ ရလဒ်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ကြေးအားလုံးကို ပြန်ပေးပါမည်။
4.11 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ
ဖဲချပ်တစ်ခုအား အနေအထားမှားပြီး ထားမိသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ကစားပွဲအား ရပ်တန့်ပြီး ကြီးကြပ်ရေးမှူးက ကွန်ပျူတာ စခရင်အရ ဖဲချပ် အနေအထားကို ပြန်ပြင်ဆင်ပါမည် (အနေအထား အမှန်)။
'ဆုံးဖြတ်ချက်များ အတည်ပြုခြင်း' အသိပေးချက် မတိုင်မီ သို့မဟုတ် 'အခြား ကစားသူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ပါ' အသိပေးချက် ပြနေစဉ်အတွင်း ဝေထားသည့် ဖဲချပ်အားလုံးအား ဖဲပစ်ပါမည်။
စားပွဲမှ ဖဲချပ်တစ်ခုခု ကျသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ 'ဖဲသေ'၊ 'အရှုံးပေး'၊ 'အချိုးတူ' နှင့် 'ဘလက်ဂျက်' ဖဲချပ်စု ရှိသည့် ကစားသူအတွက်မှလွဲ၍ ကစားပွဲအား ဖျက်သိမ်းပါမည်။
ဖဲဝေသူသည် အပိုတစ်ချပ်ကို ဝေပေးပါမည်-
ဖဲချပ် ရလဒ်ကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲ အပိုအချပ်အား ပစ်ပါမည်။
လက်ရှိ ကစားပွဲပြီးသည့်နောက် အပိုအချပ်ကို ဝေပေးပါက၊ လက်ရှိ ကစားပွဲ ရလဒ်အား မှန်သည်ဟု ယူဆပြီး အပိုအချပ်အား ပစ်ပေးကာ ကစားပွဲကို ပြန်စပါမည်။
မတော်တဆဖြင့် ဖဲချပ် နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုအထက်ကို တစ်ပြိုင်နက် ဝေမိသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်-
ဖဲချပ်များကို ပစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသက်ဆိုင်ရာ ဖဲချပ်များ၏ စကန်ရလဒ်အား ဖျက်ကာ ကစားပွဲအား ပြန်စပါမည်။
ယင်းသက်ဆိုင်ရာ ဖဲဝေသူ၏ ဖဲချပ်များအတွက် စကန်ရလဒ် မမှန်သည့် ရလဒ်အား ဖျက်ရန်နှင့် စကန်ပြန်ဖတ်ရန် လုပ်မရသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ 'ဖဲသေ'၊ 'အရှုံးပေး'၊ 'အချိုးတူ' နှင့် 'ဘလက်ဂျက်' ဖဲချပ်စု ရှိသည့် ကစားသူအတွက်မှလွဲ၍ ကစားပွဲအား ဖျက်သိမ်းပါမည်။
4.12 ဖျက်သိမ်းထားသော ကစားပွဲများ
ဖျက်သိမ်းထားသော ကစားပွဲများ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ-
ဘလက်ဂျက် ဖဲချပ်စုရှိသည့် ကစားသူများအား မှန်သော ရလဒ်အဖြစ် ယူဆပါမည်။
ဖဲသေသော ဖဲချပ်စုရှိသည့် ကစားသူများအား ရလဒ်အမှန်အဖြစ် ယူဆပါမည်။
ဖဲသေသော ဖဲချပ်စု (ဖဲချပ်2ကတ် ပိုပါသည်) မရှိသည့် ကစားသူများအား နိုင်သည်ဟု ယူဆပါမည်။
ဖဲချပ်စု မပြည့်စုံ (1 ချပ်တည်း သို့မဟုတ် ဖဲချပ်မရှိ) သော ကစားသူများအတွက်၊ ကြေးများအား ပြန်ထည့်ပေးပါမည်။
ရလဒ်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အာမခံကြေးအား ပြန်ပေးအပ်ပါမည်။
အရှုံးပေးနှင့် အချိုးတူကို ရွေးသော ကစားသူများအား ရလဒ်မှန်အဖြစ် ယူဆပါမည်။
4.13 ပျက်ပြယ်သော ကစားပွဲများ
ကစားပွဲ ပျက်ပြယ်သည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ကြေးအနေအထားနှင့် ရလဒ်ကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲ ကြေးအားလုံးအား ပြန်ပေးအပ်ပါမည်။
အော်ပရေတာသည် စမတ် ကစားသူများ သို့မဟုတ် အခြား သံသယရှိသော စမတ် ကစားသူများနှင့် ကတ်ကောင်တာများကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်များ လက်ဝယ်တွင်ရှိပါသည်။
5. တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဒရာဂွန်တိုက်ဂါး
5.1 တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဒရာဂွန်တိုက်ဂါးကို မိတ်ဆက်ခြင်း
ကစားနည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမြင့်ဆုံး ဖဲချပ်တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကစားသူ ထင်မြင်သည့် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု တစ်ခုခုကို လောင်းရန် ဖြစ်သည်။ ကစားသူသည် သရေလည်း လောင်းနိုင်သည်။ ဖဲဝေသူသည် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တစ်ချပ်နှင့် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စုအတွက် တစ်ကတ်ကို ဆွဲပေးပါမည်။ ဖဲချပ်စုတစ်ခုစီအတွက် ထပ်ဆောင်းအချပ် မဆွဲတော့ပါ။
အယူအဆအရ ဤကစားနည်း၏ ကစားသူထံ ပြန်ပေးမှုမှာ 96.26% ဖြစ်သည်။
အချိန်ကာလ ကြာသည့်အခါ၊ တင်ထားသည့် စုစုပေါင်း ကြေးများအတွက် ကစားသူထံ ပျမ်းမျှ ပြန်ပေးမှုမှာ 96.265% ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
5.2 ပါဝင်ကစားမှု ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကြေး ရွေးစရာများ
ကြေးတင်ရန်၊ ကစားသူသည် ပွတ်ဆွဲပြီး သုံးလိုသည့် ချပ်ပြားကို ရွေးရမည်။ ချပ်ပြားတန်ဖိုးကို ထိနှိပ်ပြီး ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု၊ တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု သို့မဟုတ် သရေ ရလဒ် ကဲ့သို့သော ရနိုင်သည့် လောင်းကစား ရွေးစရာများကို ရွေးရမည်။ လောင်းကစား ရွေးစရာတွင် ချပ်ပြား အလိုအလျောက် ပေါ်လာပါမည်။ တူညီသော ချပ်ပြား တန်ဖိုးကို ထိနှိပ်ခြင်းက ကစားသူ၏ ကြေးကို ရွေးထားသည့် ချပ်ပြားအတိုင်း တိုးစေမည် သို့မဟုတ် ကစားသူက ချပ်ပြား၏ နောက်ထပ် ပမာဏတစ်ခုကိုလည်း ရွေးနိုင်ပါသည်။ စားပွဲ၏ အများဆုံး လောင်းကစား ကန့်သတ်ချက် မရောက်မချင်း ကစားသူက ကြေးပမာဏကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ကစားသူ၏ ကြေးအတွက် နောက်ဆုံးချပ်ပြားကို ဖယ်ရှားရန်၊ ဂိမ်းသုံးစွဲသူ ကြားခံစနစ်ရှိ ပြန်ထားရန် (UNDO) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ အပေါ်ရှိ စက္ကန့် 20 လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ကစားသူက ၎င်းတို့၏ လောင်းကြေးများကို မဖြစ်မနေ တင်ရပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့် လောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။
ကြေးနှစ်ဆ (DOUBLE) ခလုတ်သည် ကစားသူအား စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားပြီးဖြစ်သည့် အတည်ပြုမထားသော ကြေးအားလုံးကို နှစ်ဆ တင်နိုင်စေပါမည်။ တင်ထားပြီး အတည်ပြုထားသော ကြေးအားလုံးအား နှစ်ဆတင် မရနိုင်ပါ။
အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်အား ဘယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးသည်နှင့် ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုပြီး ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူလာပါမည်။ လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်မစေ့မီ ထည့်သွင်းမှု အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်လုတ်ကို ထိနှိပ်နောက်ပိုင်း တင်ထားသော ထပ်ဆောင်း ကြေးအားလုံးမှာ နှိပ်နေခဲ့သည့် အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ထိုသို့မပြီးစီးပါက၊ ယင်းထပ်ဆောင်းကြေးများအား အတည်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကစားသူ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
လောင်းကစားခြင်း ရွေးစရာအားလုံးတွင် တင်ထားသည့် ကြေးအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်၊ ဂိမ်းကစားခြင်း ထိန်းချုပ်မှုမှ ရှင်းရန် (CLEAR) ခလုတ်အား နှိပ်ပါ။ အတည်ပြုရန် ခလုတ်ကို မနှိပ်ရသေးခင်တွင်သာ ရှင်းရန် (CLEAR) နှင့် ပြန်ထားရန် (UNDO) နှစ်ခုလုံးကို နှိပ်နိုင်ကြောင်း မှတ်သားပါ။
ကစားသူသည် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စုနှင့် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စုနှစ်ခုလုံးပေါ်တွင် ကြေးတင်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ကစားသူသည် ဝင်းဒိုး၏ အပေါ်ဘယ်ထောင့်တွင် ကြေးပမာဏနှင့် အနိုင်ပမာဏကို ကြည့်နိုင်သည်။
ကစားသူသည် အနည်းဆုံး ကြေး ကန့်သတ်ချက်အောက်နည်းသော ကြေးများကို တင်ပြီး အတည်ပြုရန် (CONFIRM) ခလုတ်အား ထိနှိပ်ပါက၊ ကစားသူအား ထပ်ဖြည့်ရန် သို့မဟုတ် ဂိမ်းသို့ပြန်သွားရန်ငှာ ပယ်ဖျက်ရန်ဆိုသည့် ရွေးစရာနှစ်ခု ကမ်းလှမ်းသော သတိပေးချက် ဝင်းဒိုး ပေါ်လာပါမည်။ ထပ်ဖြည့်ရန် (TOP UP) ခလုတ်ကို ထိနှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ ကစားသူသည် မမှန်သော လောင်းကြေးအားလုံးအား သက်ဆိုင်ရာ အနည်းဆုံး ကန့်သတ်ချက်သို့ ထပ်ဖြည့်နိုင်ပြီး ဆက်လက်၍ ကြေးအားလုံးကို အတည်ပြုကာ ကစားသူများ၏ အကောင့်သို့ ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ ပယ်ဖျက်ရန် (CANCEL) ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ အတည်ပြုထားသည့် ကြေးများ မရှိဘဲ ကစားသူသည် လက်ရှိ ကြေး ရွေးစရာများသို့ ပြန်ရောက်ပါမည်။
လောင်းကစား တိုင်မာ အချိန်စေ့သည်နှင့်၊ ဖဲဝေသူသည် ဖဲချပ်တစ်ခုကို ပစ်လိုက်ပါသည်၊ ထို့နောက် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စုနှင့် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စုသို့ ဖဲတစ်ချပ်စီ ဝေပေးပါသည်။ အမြင့်ဆုံး ဖဲချပ် တန်ဖိုးရှိသော ဖဲချပ်စုက ကစားပွဲကို နိုင်ပါသည်။ အေ့စ်သည် အနိမ့်ဆုံး ဖဲချပ် တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး ကင်းသည် အမြင့်ဆုံး ဖဲချပ် တန်ဖိုး ဖြစ်သည်။ ဖဲချပ်များ၏ ဖဲချပ်စု အဆင့်မှာ အေ့စ်-2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K ဖြစ်သည်။ ဆွဲလိုက်သည့် နှစ်ချပ်လုံးမှာ တန်ဖိုးတူ သို့မဟုတ် သရေ ဖြစ်နေသည့်ဖြစ်ရပ်တွင်၊ တင်ထားသည့် ကြေးတန်ဖိုး၏ တစ်ဝက်ကိုသာ ပေးချေပါမည်။ သရေ ကစားပွဲအတွင်း၊ ကစားသူသည် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စုတစ်ခုခုတွင် ကြေးတင်ပါက၊ ကစားသူ၏ ကြေးတစ်ဝက်ကိုသာ ပြန်ပေးပါမည်။ ပထမ အလှည့်ပြီးနောက်၊ ယခင်အလှည့်မှ တူညီသော ကြေးကို တင်ရန် ပြန်လောင်းရန် (REBET) ခလုတ်ကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။ ပထမ အလှည့်ပြီးနောက်၊ ယခင်အလှည့်မှ တူညီသော ကြေးကို တင်ရန် ပြန်လောင်းရန် (REBET) ခလုတ်ကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက် ဒရာဂွန် တိုက်ဂါး ကစားပွဲတွင်လည်း ဘေးထိုးကြေးများ ရှိပါသည်- မ/စုံ၊ ကြီး/သေး၊ အနက်/အနီ။
ဘေးထိုးကြေးများသည် ကစားသူက တင်နိုင်သည့် အသေးအဖွဲကြေးများ ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- ဘေးထိုးကြေးများဖြင့် လောင်းနေချိန်တွင်၊ ဖဲချပ်အား7အဖြစ် ဝေပေးပါက ကစားသူသည် သူ/သူမ တင်ထားသည့် သူ/သူမ၏ ကြေးအားလုံးကို ရှုံးပါသည်။ တစ်ကြိမ်၏ အလှည့် 50 တွင်၊ ဘေးထိုးကြေးများကို လက်မခံတော့ပါ။
5.3 ကြေး ရွေးစရာများနှင့် ထုတ်ပေးငွေ
အောက်ပါတို့မှာ တိုက်ဂါး ဒရာဂွန် တိုက်ဂါး ကစားပွဲ၏ ကြေး ရွေးစရာများများ ဖြစ်သည်-
ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စုအတွက် လောင်းကြေး။ ရလဒ်မှာ သရေဖြစ်ပါက ကြေး၏ 50% အား ကစားသူထံ ပြန်ပေးပါမည်။ 1:1
တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု၏အတွက် လောင်းကြေး။ ရလဒ်မှာ သရေဖြစ်ပါက ကြေး၏ 50% အား ကစားသူထံ ပြန်ပေးပါမည်။ 1:1
ဒရာဂွန်နှင့် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စုနှစ်ခုလုံး၏ တန်ဖိုးမှာ ညီမျှ/တူညီသော ဖဲချပ်စု အဆင့် တန်ဖိုးဖြစ်သည့် သရေအပေါ် လောင်းကြေး 8:1
မဂဏန်း ဖြစ်မည့် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု (ဘယ်) သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု (ညာ) ၏ တန်ဖိုးအပေါ် လောင်းကြေး ရလဒ်မှာ7ဖြစ်ပါက လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။ 1:1
စုံဂဏန်း ဖြစ်မည့် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု (ဘယ်) သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု (ညာ) ၏ တန်ဖိုးအပေါ် လောင်းကြေး ရလဒ်မှာ7ဖြစ်ပါက လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။ 1:1
အေ့စ်မှ6အထိ အပါအဝင် ဂဏန်းငယ် ဖြစ်မည့် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု (ဘယ်) သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု (ညာ) ၏ တန်ဖိုးအပေါ် လောင်းကြေး ရလဒ်မှာ7ဖြစ်ပါက လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။ 1:1
8 မှ K အထိ အပါအဝင် ဂဏန်းကြီး ဖြစ်မည့် ဒရာဂွန်၏ ဖဲချပ်စု (ဘယ်) သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး၏ ဖဲချပ်စု (ညာ) ၏ တန်ဖိုးအပေါ် လောင်းကြေး။ ရလဒ်မှာ7ဖြစ်ပါက လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။ 1:1
ဒရာဂွန် ဖဲချပ်စု (ဘယ်) သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး ဖဲချပ်စု (ညာ) ၏ ပိုကာ အရောင် အနီရောင် ဖြစ်မှုအပေါ် လောင်းကြေး။ ရလဒ်မှာ7ဖြစ်ပါက လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။ 1:1
ဒရာဂွန် ဖဲချပ်စု (ဘယ်) သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး ဖဲချပ်စု (ညာ) ၏ ပိုကာ အရောင် အနက်ရောင် ဖြစ်မှုအပေါ် လောင်းကြေး။ ရလဒ်မှာ7ဖြစ်ပါက လောင်းကြေး ရှုံးပါသည်။ 1:1
5.4 ဖဲချပ် တန်ဖိုးများ
တိုက်ရိုက် ဒရာဂွန် တိုက်ဂါးတွင် ဖဲချပ်များအား အေ့စ်မှစ၍ ကင်းအထိ အနိမ့်ဆုံးမှ အမြင့်ဆုံးအတိုင်း အဆင့်သတ်မှတ်ပါသည်။
အေ့စ်များအား တစ်ဟု ရေတွက်သည်
ဂျက်များအား 11 ဟု ရေတွက်သည်
ကွင်းများအား 12 ဟု ရေတွက်သည်
ကင်းများအား 13 ဟု ရေတွက်သည်
ဖဲဝေသူသည် ကစားပွဲများ၏ အလှည့်တိုင်း၏ အစတွင် ဖဲတစ်ချပ်ကို ပစ်ပါမည်။
5.7 အီလက်ထရွန်းနစ် ချွတ်ယွင်းချက်များ
ဖဲချပ်အား ဖဲဝေသူက စကန်ဖတ်ပြီး ရလဒ်အား ကစားသူများ၏ ကစားသူ၏ စခရင်ပေါ်တွင် ပြသပါမည်။ ကတ်တစ်ခုခုကို စကန်ဖတ်မရပါက၊ ကစားသူထံ ရလဒ်ကို ပြသရန်ငှာ ဖဲဝေသူသည် ကတ်ကို ပြန်လည်၍ စကန်ဖတ်ပါမည်။
ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ပြဿနာများ အကန့်အသတ်မရှိ အပါအဝင် ကစားသူ၏ စက်ပစ္စည်း ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခု၊ ကစားပွဲ ရလဒ်ကို ပျက်ပြယ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ ကစားသူက အစီရင်ခံစာ အပိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ လောင်းကြေး မှတ်တမ်းကို စစ်နိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက် ဖဲဝေသူ ဒရာဂွန် တိုက်ဂါးအတွင်း အော်ပရေတာ စနစ် ချွတ်ယွင်းချက် နှင့်/သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုက ကစားပွဲကို ပျက်ပြယ်စေပြီး သီးသန့် စားပွဲကို ပိတ်ပါမည်။
5.8 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ
ဖဲဝေသူသည် အလှည့်၏ အစတွင် ဖဲချပ်ကို ပစ်ရန် မေ့သွားပြီး ဒရာဂွန် သို့မဟုတ် တိုက်ဂါး ဖဲချပ်စုတွင် ထားလိုက်ပါက၊ ကြီးကြပ်သူက ကွန်ပျူတာ စခရင် (အနေအထားမှန်) နှင့်အညီ ဖဲချပ် အနေအထားကို ပြင်ဆင်ပြီး ဂိမ်းကို ပြန်စပါမည်။
5.9 ပျက်ပြယ်သော ကစားပွဲများ
အော်ပရေတာသည် ဤစည်းမျဉ်းတစ်စုံတစ်ရာအား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါသည်။